ShweMinThar: April 2020
သဘင်ထဲကဗိသုကာ [ အစ/အဆုံး]
မြန်မာသဘင်တွင် ဗိသုကာပညာရပ်သည် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဌတစ်ရပ်ကနေ အခိုင်အမာထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ ထိုကြောင့် သဘင်နှင့်ဗိသုကာလို့ဆိုလိုက်ရင် လူတော်တော်များများက "အနုပညာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပညာ"သည် ဘာမှဆက်စပ်မှုမရှိဘူး ဟုပြောကြ ထင်ကြ ယူဆကြမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ကဲ အဲလိုဆိုရင် ယခုရှုထောင့်ကနေ တွေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်...။
မြန်မာဇာတ်သဘင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသောဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ် မကျင်းပခင်မှာ ဇာတ်ခုံများ(stages)၊ယာယီဇာတ်ရုံများ(temporary theatres)ကို အရင်ဆုံးတည်ဆောက်ရပါတယ်။ထိုနောက် ဇာတ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် လိုအပ်သည့် ဆက်တင်ပစ္စည်းများ(Set facilities)များကို ဇာတ်သဘင်အတက်ပညာရှင်များက တီထွင်ဖန်တီးရပါတယ်။အဲဒိအပြင် အနုပညာရှင်များနေဖို့အတွက် အဝတ်စားလဲခန်းများ(Dressing Room)၊မိက်ကပ်ခန်းများ(Make-up Room)များနှင့် ပရိသတ်များကြည့်ရှုဖို့အတွက် နေရာထိုင်ခင်းများ(auditorium)စသည့်တို့ကို နေရာချအရင်ချရသည်။ဤအရာများသည် သဘင်တွကို ဗိသုကာပညာရပ်များက ပံ့ပိုးပေးနေသည် အသေအချာပင်ဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်၊လူမျိုးတစ်မျိုးဆီတိုင်းမှာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဆိုတာ ရှိကြပါသည်။စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ သဘင်ဘဲဖြစ်ပါသည်။သဘင်မှာ အနိမ့်သဘင်နှင့် အမြင့်သဘင်ရယ်လို့ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။အမြင့်သဘင်မှာ ရုပ်သေးရုပ်များကို ကြိုးဖြင့်ဆွဲ၍ ကပြရသော ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဖြစ်ပြီး အနိမ့်သဘင်ကတော့ သဘင်ပညာရှင်များကိုယ်တိုင် ကပြဖျော်ဖြေရသော တင်ဆက်မှုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။အနိမ့်သဘင်တွင် ဇာတ်သဘင်နှင့် အငြိမ့်သဘင် နှစ်မျိုးခွဲထားပါသည်။နောင်တွင် အငြိမ့်သဘင်မှ ပြန့်ပွားလာသော ပဒေသာကပွဲများ၊တေးသရုပ်ဖော်ကပွဲများစသည့်ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် ဇာတ်နှင့်အငြိမ့်ရဲ့ကွဲပြားပုံကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပါရစေ။ဇာတ်မှာ မင်းသားခေါင်းဆောင်ကပြရပြီး အငြိမ့်မှာ မင်းသမီးခေါင်းဆောင်ကပြရသော အဖွဲ့အစည်းများသာဖြစ်ပါသည်။ပဒေသာကပွဲသည် ပဏမဘုရားကန်တော့ခန်းအစဉ်မှစ၍ အငြိမ့်ခန်းရောက်သည့်တိုင်အောင် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးက ဦးဆောင်ကပြရပြီး နှပါးသွား၊ပြဇာတ်၊နောက်ပိုင်းများကိုတော့ အဖွဲ့ထဲမှဟာသလူရွင်တော်တစ်ယောက်က ခေါင်းဆောင်၍ဆက်လက်ကပြရပါတယ်။သဘင်တွင် တခြားသောဖျော်ဖြေရေးများဖြစ်သော မျက်လှည့်ပွဲများ၊ဆပ်ကပ်များသည်လည်း သဘင်နှင့် ရောနှော နွယ်ယှက်လာပါသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရကြည့်လျှင် ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထပ်ကတည်းက သဘင်ပညာရှင် အနုပညာရှင်တို့သည် ပျော်ပွဲသဘင်၊ကပွဲသဘင်၊မင်းပွဲသဘင်များတွင် ကပြအသုံးတော်ခံရသည်။ရတနာပုံခေတ် ဘဝရှင်မင်းတုန်းမင်းတရာကြီးလက်ထပ်တွင် နန်းတော်တွင်းတွင် ကပွဲရုံများတည်ဆောက်ပေး၍ သဘင်ပညာရှင်များကိုမြောက်စားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်တွင် သဘင်ပညာရှင်များသည် ပထမဦးစွာ မြေဝိုင်းစနစ်ဖြင့် စတင်ပြခဲ့ကြသည်။မြေဝိုင်းစနစ်သည် သဘင်သည်များက မြေကြီးပေါ်တွင် ဖျာကြမ်းခင်း၍ ကပြရသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ထောင့်လေးထောင့်တွင် ရေနံဆီမီးတိုင်များစိုက်ထားသည်။သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဆိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ပါဝင်သည်(ထိုခေတ်က မှန်စီရွှေချထားသောဆိုင်းမှးမှာ မြန်မာနန်းတွင်မှာသာ ထားရှိသည်)။အရပ်ရှစ်မျက်နှာတွင်လူအများဝိုင်းပြီထိုင်၍ကြည့်ကြသည်။တချို့မှာ မိမိပါလာသော လှည်းပေါ်မှ ထိုင်၍ကြည့်ကြသည်။ကိုလိုနီခေတ်ရောက်သောအခါ နန်းတွင်းတွင် ကပြခဲ့သော ဇာတ်မင်းသာကြီးအီနောင်မောင်စံတုတ်သည် ဇာတ်ရုံကို အစောဆုံးတီထွင်ဖန်တီးကာ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။သူတည်ဆောက်ခဲ့သောဇာတ်ရုံတွင် ဇာတ်ခုံမပါရှိပေ။ကပြသူမှာ မြေဝိုင်းခေတ်ကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်တွင် ကပြရသည်။စာရေးသူအမြင်ပြောရလျှင် ထိုဇာတ်ရုံသည်အမိုးအကာပါသော ယာယီ အဆောက်အဦးတစ်ခုရယ်လို့သတ်မှတ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ထိုနော် မြန်မာဇာတ်ခုံကို စတင် ဖန်တီး၍ကပြခဲ့သူတစ်ဦးရှိသည်။ထိုသူမှာ ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဘစင်ဘဲ ဖြစ်သည်။
ဤသို့ဇာတ်သဘင်ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့ရာ ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်(စိန်မဟာသဘင်)ခေတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်ခေတ်တွင် လိုအပ်သော ဇာတ်ပစ္စည်းများနှင့်settingပစ္စည်းများကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်အိန္ဒိယမှပြန်လာပြီးနောက် ယာယီရွက်ထည်ရုံကြီးတစ်ရုံကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင် စတင်အသုံးခဲ့သည်။အဲအပြင် အောက်လင်းမီးအိမ်များ(Stormlantern)ဖြင့်ကပြနေရာမှ လသာမှန်အိမ်များ(hanging Lanterns)ဖြင့်ပြောင်းလဲ ကပြမှုကိုလည်း စတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ထိုနော်သူ၏ဖြစ်သူဇာတ်မင်းသားကြီးဦးကဲနက်စိန်ကို ဇာတ်သဘင်ပညာရပ်(Troupe Subject) သင်ယူရန် နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ဦးကဲနက်စိန် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာသောအခါ ပျူစောထီးအော်ပရာထဲက ရှုးပျံဆိုသည့် ခေါင်းသုံးလုံး သတ္တဝါကြီးကိုလည်း ဆက်တက်ပညာဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ရာ ပရိသတ်များ လွန်စွာ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြသည်။ထိုခေတ်ကို ဇာတ်သဘင်စိန်ခေတ်ဟု မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ဇာတ်သဘင်စိန်ခေတ်တွင် ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်ဟာ ယောကျာ်းမင်းသမီး မယ်အောင်ဗလနှင့်တွဲဖက်၍ ယက္ခမယ်ဆိုသည့် နောက်ပိုင်းဇာတ်တော်ကို စက်သီးနှင့် ကြိုးအသုံးပြု၍ လူကို လေပေါ်တွင်ပျံသန်းအောင် ဖန်းတီခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် ဦးဖိုးစိန်တို့ ဦးစိန်ကတုံးတို့နှင့် တွဲဖက်ကပြခဲ့သော ယောက်ျားမင်းသမီး မယ်အောင်ဗလမှာ LGBT တစ်ယောက်မဟုတ်ပေ။သူတွင် ဇနီးနှင့်သားသမီးများရှိသော ယောကျာ်းစစ်စစ် တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးဖိုးစိန်နှင့် ဦးစိန်ကတုံးတို့ဟာ ရှေးမြန်မာနှစ်ပါးသွားများတွင် ကပြခဲ့သာ ပုဝါတကမ်း လက်တစ်လှမ်းဆိုသည့်စနစ်ကို အသွင်တစ်မျိုးပြောင်းချင်ခဲ့သည်။ မင်းသမီးနေရာတွင် သဘင်အမျိုးသမီးစစ်စစ်များကို အသုံးပြုလျှင် မြန်မာအမျိုးသမီးများအိနြေ္ဒဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် မင်းသမီးအတက်တွင် တဖက်ကမ်းခပ် တက်မြှောက်သော ယောက်ျာ်းမင်းသမီး မယ်အောင်ဗလကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၂၈၀ပြည့် နတ်တော်လပြည့်ကျော်၎ရက် ၁၉၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ စနေနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘင်လောကကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လူတစ်ဦးမွေးဖွားလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသူကား အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းဦးတင်မောင်ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေမန်းဦးတင်မောင်သည် အသက်၁၃နှစ်မှ စ၍ မင်းသားအနေဖြင့် ကပြလာခဲ့ရာ အသက်၁၈နှစ်အရွယ်တွင် မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်အဖွဲ့ဖြစ်သော သစ္စာ မေတ္တာ ရွှေမန်းသဘင်အဖွဲ့ကြီးကို စတင် အုတ်မြစ်ချခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၈ခုနှစ်တွင် မင်းသားကြီးဦးစိန်ကတုံး၏ မန်နေဂျာဖြစ်သော ဦးကျောက်ဒွန်းဆီမှ ရွက်ထည်ရုံကြီးကို ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီးကပြခဲ့ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ထိုခေတ်က ကပြခဲ့သော ရွက်ထည်ရုံကြီးအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပါရစေ။ ရွက်ထည်ရုံဆိုသည်မှာ- အသင့်ဆောက်လုပ်ရန်လွယ်ကူသော ဇာတ်ရုံတစ်ရုံသာ ဖြစ်ပါသည်။ထိုဇာတ်ရုံ၏ အမိုးနှင့်အကာများကို ရှေးကရွက်သင်္ဘောများတွင် အသုံးပြုသော ရွက်ဖျင်ပိတ်စဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသည်။ ဇာတ်ရုံ၏အမိုးကိုတော့ (A)ပုံသဏ္ဍန်ရှိသော မြင်းမိုရ်ပိတ်အမိုး(Gable Roof)ဖြင့်မိုးထားသည်။တချို့သောရွက်ထည်ရုံများတွင် ညီညာပြန်ပြူးသောအမိုး(Flat Roof)များကိုလည်း မိုးကားထားသည်။
ဇာတ်ရုံ၏အကာသည် အမိုးမှာမြေပြင်ပေါ် (ဇာတ်အပြင်ဘက်)သို့ လျော့ဇောက်ပုံ ပြန့်ကားထွက်နေသည်။ဇာတ်ရုံ၏အမိုးအစွန်း( တံစက်မြိတ်) ၏ပိတ်စပေါ်တွင် အပေါက်ဖောက်၍ ကွင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ထိုကွင်းများနှင့် ဇာတ်ရုံ အပြင်ဘက်တွင်စိုက်ထားသော ငုတ်တိုင်တို့ကို ကြိုးဖြင့်တင်းတင်းဆွဲကာ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ဇာတ်ရုံကိုတောင့်တင်း ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ဇာတ်ခုံအတွင်းရှိ တိုင်များ (Column )၊ ရက်မများ (Beam)ကိုတော့ ဝါးပိုးဝါးများကို အသုံးပြုထားပါသည်။
ဇာတ်ခုံ (Main Stage)ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့် ညာဘက်ခြမ်းတွင် အသားပိုဇာတ်ခုံများ(Side Stages) ကို သစ်သားဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ ထိုအသားပိုဇာတ်ခုံများကို မူလဇာတ်ခုံနှင့် အမြင့် ညီအောင် တပြေးတည်းပြုလုပ်ရပါသည်။ ယခင်ကခဲ့သော အကျယ် (၁၂)စတုရန်းတောင် အမြင့်၂ပေရှိသောဇာတ်ခုံသည် ရှေ့မျက်နှာစာ အလျားပေ ၃၀ အနံအရှေ့ပေ၅၀ အမြင့်၂ပေခွဲဖြင့် ပြောင်းလဲတည်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ပဒေသာပွဲတွင် တီးဝိုင်းကို ဇာတ်ခုံရှေ့တွင်ထားရသဖြင့် ပွဲကြည့်သူများမြင်ရအောင် ဇာတ်ခုံအမြင့် ၅ပေတည်ဆောက်ဖန်းတီးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာဇာတ်သဘင်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နယ်လှည်ခရီးသွားကပြရသော အဖွဲအစည်းများဖြစ်သဖြင့် ဇာတ်ရုံသည် သဘင်အနုပညာရှင်တို့ ဒုတိယအိမ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဇာတ်သဘင်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နယ်လှည့်ခရီးသွားကပြရသော အဖွဲအစည်းများဖြစ်သဖြင့် ဇာတ်ရုံသည် သဘင်အနုပညာရှင်တို့၏ ဒုတိယအိမ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ဇာတ်အဖွဲ့သားများသားနေရန်အတွက် အခန်းများကို သပ်ရပ်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးရပါသည်။ စာရေးသူတို့နိုင်ငံတွင် တခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ Make-up Roomနဲ့ Dressing Roomကို သီးခြားခွဲမထားပေ။ ဇာတ်သမားတစ်ဦးအတွက် အခန်းတစ်ခန်းသည် အဝတ်အစားလဲဖို့ Make-up လိမ်းဖို့ နေဖို့အတွက်ပါ ဘက်စုံအသုံးပြုရန် ဖန်တီးပေးထားသည်။ အခန်းတစ်ခန်းကိုတော့ ပိတ်ကားကြီးများဖြင့် အခန်းကန်းပေးထားသည်။ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ခန်းစီးလိုက်ကာများကို အသုံးပြုသည်။
ပါဠိဘာသာအရ ဇာတ်ဆိုသည်မှာ စည်း(စည်းကမ်း)၊ သဘင်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။အနက်အဓိပ္ပါယ်အရ စည်းကမ်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရာတွင်လည်း စည်းကမ်းရှိသလို အခန်းများဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း စည်းစနစ်ကျလှပေသည်။ဇာတ်အဖွဲ့တွင် ယောကျာ်းလေးများသည် မိန်းကလေးအခန်းများသို့ ကူးလူးသွားလာခွင့်မရှိသဖြင့် အခန်းတိုင်းကို အပေါ်အမိုးမှစ၍ အောက်ခြေမြေပြင်ထိတိုင်အောင် ပိတ်ကားကြီးများဖြင့်ကာထားသည်။ယခုအချိန်တွင် အခန်းများ၏အမြင့်သည် ၉ပေ သာရှိကြတော့သည်။ ဇာတ်ခုံ၏ညာဘက် (ပရိသတ်ဘက်ကကြည့်လျှင် ဘယ်ဘက်)တွင် ဘုရားခန်းပါဝင်သည်။ ထိုဘုရားခန်းသောညာဘက်ခြမ်းတွင် လင်စုံမယားဖက် တွဲ၍နေပိုင်ခွင့်မရှိပေ။နေလျှင် ဇာတ်တွင် ပြဿနာ တစ်တစ်ရာဖြစ်ပေါ်တက်သည်ဟု အယူအဆများ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် ဇာတ်အဖွဲ့တွင် အတူတူတွဲ၍အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဇနီးမောင်နှံများပါခဲ့လျှင် ထိုသူတို့အတွက် ဇာတ်ခုံ၏အနောက်ဘက်နှင့် ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် သီးသန့်ခန်းများစီစဉ်ပေးရသည်။ ထိုအပြင် တခြားသော သီးသန့်ခန်းများသော ခေါင်းဆောင်မင်းသားခန်း၊ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးခန်း၊ လူရွှင်တော်ခေါင်းဆောင်နေသော အခန်းများစသည် တို့ပါဝင်သည်။ထိုသီးသန့်ခန်းများ၏အကျယ်အဝန်းသည် ၉ပေပတ်လည်မှစ၍နေထိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရာထူးအဆင့်အတန်း၊ဇာတ်တွင်အရေးပါမှု ပေါ်မူတည်ပြီး ၁၂ပေ၁၃ပေထိကျယ်ဝန်းသည်။
တခြားသော ယိမ်းမင်းသမီးများ၊မင်းသားများ၊ဇာတ်အဖွဲ့သားများနေရန်အတွက် လူအယောက်၃၀ဆန့်သော ဘုံအခန်း(hallပုံစံ) တည်ဆောက်ပေးထားသည်။ထိုhallခန်းတွင် ဇာတ်သူဇာတ်သားတစ်ဦးလျှင် အိပ်ယာတစ်ခု Make-up လိမ်းရန်နေရာ အဝတ်သေတ္တာများထားသောနေရာ များပါဝင်သည်။တစ်ချို့ဇာတ်အများသည် လူတစ်ဦးလျှင် အခန်းတစ်ခန်းပေး၍ နေစေသည်။ဇာတ်အဖွဲ့လျှင် လူအင်အား၁၀၀ကျော် ပါဝင်သဖြင့် အခန်းများလည်း များစွာရှိသည်။ထိုအခန်းများကို သွားလာရန်အတွက် အလည်လျှောက်လှမ်းများကို ဝင်္ကပါပုံစံဖန်တီးထားသည်။ လျောက်လမ်း၏ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင် ဘုံအဝတ်အစားများထည့်ထားသော ဇာတ်သေတ္တာများထားရှိသည်။ ဘုံအဝတ်အစားဆိုသည်မှာ ဝန်းကြီးများဆောင်းသော ဗောင်းတော်(ဦးထုတ်)များ၊ရာဇဝင်နှင့်ဆိုင်သောဝတ်ရုံများ၊ပုလိပ်ဝတ်စုံ၊စစ်သားဝတ်စုံများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ထိုဝတ်စုံများကိုဇာတ်အဖွဲ့များလိုအပ်လျှင်အလွယ်တကူထားရှိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုအရာအားလုံးသည် ဇာတ်ရုံ၏အရိပ်အမြုံအတွင်းတွင် ရှိသည်။ဇာတ်ရုံ၏အနောက်ဘက်သီးခြားခွဲထွက်နေသော အဆောက်အဦးမှာ စားဖိုဆောင်သာဖြစ်သည်။
ထိုစာဖိုးဆောင်တွင် စားဖိုမှူးများထားရှိသော ဇာတ်အဖွဲ့များရှိသလို တချို့ဇာတ်သဘင်များတွင် ရှေးအခါက ဇာတ်သမားများဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်သော ဟင်းလှည့်စနစ်ကိုလည်း ကျင့်သုံးသည်။ဟင်းလှည့်စနစ် လူရွှင်တော်ဟင်းလှည့်၊ မင်းသမီးဟင်းလှည့်၊ မင်းသားဟင်းလှည့်၊ကားဆွဲ့အဖွဲ့၊ မီးအဖွဲ့စသည့်ဖြင့် ၇ရက်စာအတွက် ဇာတ်ဆရာမှ အဖွဲ့၇ဖွဲ့ပေးထားပြီး အလှည့်ကျ တာဝန်ယူချက်ရသည်။ လက်ရှိ သဘင်တွင် ထိုစနစ်ကိုကျင့်သုံးသော အဖွဲ့တော်တော်လေး ရှားပါးသွားသည်။ ထိုစားဖိုဆောင်၏အကျယ်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅ပေပတ်လည်ခန့် ရှိသည်။
ထို့အပြင် ရွက်ထည်စုံရုံ၏အပြင်ဘက်တွင် မီးများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ဇာတ်ရုံ၏အရှေ့ဘက် Gate Show(ပရိသက်များဝင်သောအပေါက်)တွင် ကပြမည့် အနုပညာရှင်များ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ဇာတ်အဖွဲ့နာမည်များကို ပန်းချီရေးခြင်း ပိုစတာပြုလုပ်ခြင်းများဖြင့်ကျော်ငြာကြသည်။ထိုခေတ်က ဗီနိုင်းမပေါ်သေးပေ။
အလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်း(ဦး)တင်မောင် လက်ထက်သို့ရောက်သောအခါ အခန်းဖွဲ့စည်းမှုတွင် အဖွဲ့သားဗဟုသုတရစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဇာတ်ရုံတွင် စာကြည့်တိုက်ကိုပါ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ။
သဘငျထဲကဗိသုကာ [ အစ/အဆုံး]
မွနျမာသဘငျတှငျ ဗိသုကာပညာရပျသညျ အဓိကကသြော အခနျးကဏ်ဌတဈရပျကနေ အခိုငျအမာထောကျပံ့ပေးနပေါသညျ။ ထိုကွောငျ့ သဘငျနှငျ့ဗိသုကာလို့ဆိုလိုကျရငျ လူတျောတျောမြားမြားက "အနုပညာနဲ့ဆောကျလုပျရေးပညာ"သညျ ဘာမှဆကျစပျမှုမရှိဘူး ဟုပွောကွ ထငျကွ ယူဆကွမှာ အမှနျပငျဖွဈ၏။ကဲ အဲလိုဆိုရငျ ယခုရှုထောငျ့ကနေ တှေးကွညျ့လိုကျကွရအောငျ...။
မွနျမာဇာတျသဘငျဘဲဖွဈဖွဈ တခွားသောဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျတှဘေဲဖွဈဖွဈ မကငျြးပခငျမှာ ဇာတျခုံမြား(stages)၊ယာယီဇာတျရုံမြား(temporary theatres)ကို အရငျဆုံးတညျဆောကျရပါတယျ။ထိုနောကျ ဇာတျလုပျငနျးခှငျအတှကျ လိုအပျသညျ့ ဆကျတငျပစ်စညျးမြား(Set facilities)မြားကို ဇာတျသဘငျအတကျပညာရှငျမြားက တီထှငျဖနျတီးရပါတယျ။အဲဒိအပွငျ အနုပညာရှငျမြားနဖေို့အတှကျ အဝတျစားလဲခနျးမြား(Dressing Room)၊မိကျကပျခနျးမြား(Make-up Room)မြားနှငျ့ ပရိသတျမြားကွညျ့ရှုဖို့အတှကျ နရောထိုငျခငျးမြား(auditorium)စသညျ့တို့ကို နရောခအြရငျခရြသညျ။ဤအရာမြားသညျ သဘငျတှကို ဗိသုကာပညာရပျမြားက ပံ့ပိုးပေးနသေညျ အသအေခြာပငျဖွဈပသေညျ။
နိုငျငံတဈနိုငျ၊လူမြိုးတဈမြိုးဆီတိုငျးမှာ ရိုးရာယဉျကြေးမှုအနုပညာဆိုတာ ရှိကွပါသညျ။စာရေးသူတို့နိုငျငံမှာလညျးရှိပါတယျ။အဲဒါကတော့ သဘငျဘဲဖွဈပါသညျ။သဘငျမှာ အနိမျ့သဘငျနှငျ့ အမွငျ့သဘငျရယျလို့ နှဈမြိုး ရှိပါတယျ။အမွငျ့သဘငျမှာ ရုပျသေးရုပျမြားကို ကွိုးဖွငျ့ဆှဲ၍ ကပွရသော ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုဖွဈပွီး အနိမျ့သဘငျကတော့ သဘငျပညာရှငျမြားကိုယျတိုငျ ကပွဖြျောဖွရေသော တငျဆကျမှုဘဲ ဖွဈပါတယျ။အနိမျ့သဘငျတှငျ ဇာတျသဘငျနှငျ့ အငွိမျ့သဘငျ နှဈမြိုးခှဲထားပါသညျ။နောငျတှငျ အငွိမျ့သဘငျမှ ပွနျ့ပှားလာသော ပဒသောကပှဲမြား၊တေးသရုပျဖျောကပှဲမြားစသညျ့ဖြျောဖွရေေးအဖှဲ့မြားလညျး ထှကျပျေါလာခဲ့ပါသညျ။ ဤတှငျ ဇာတျနှငျ့အငွိမျ့ရဲ့ကှဲပွားပုံကို အနညျးငယျရှငျးပွပါရစေ။ဇာတျမှာ မငျးသားခေါငျးဆောငျကပွရပွီး အငွိမျ့မှာ မငျးသမီးခေါငျးဆောငျကပွရသော အဖှဲ့အစညျးမြားသာဖွဈပါသညျ။ပဒသောကပှဲသညျ ပဏမဘုရားကနျတော့ခနျးအစဉျမှစ၍ အငွိမျ့ခနျးရောကျသညျ့တိုငျအောငျ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးက ဦးဆောငျကပွရပွီး နှပါးသှား၊ပွဇာတျ၊နောကျပိုငျးမြားကိုတော့ အဖှဲ့ထဲမှဟာသလူရှငျတျောတဈယောကျက ခေါငျးဆောငျ၍ဆကျလကျကပွရပါတယျ။သဘငျတှငျ တခွားသောဖြျောဖွရေေးမြားဖွဈသော မကျြလှညျ့ပှဲမြား၊ဆပျကပျမြားသညျလညျး သဘငျနှငျ့ ရောနှော နှယျယှကျလာပါသညျ။
သမိုငျးကွောငျးအရကွညျ့လြှငျ ရှေးမွနျမာဘုရငျမြားလကျထပျကတညျးက သဘငျပညာရှငျ အနုပညာရှငျတို့သညျ ပြျောပှဲသဘငျ၊ကပှဲသဘငျ၊မငျးပှဲသဘငျမြားတှငျ ကပွအသုံးတျောခံရသညျ။ရတနာပုံခတျေ ဘဝရှငျမငျးတုနျးမငျးတရာကွီးလကျထပျတှငျ နနျးတျောတှငျးတှငျ ကပှဲရုံမြားတညျဆောကျပေး၍ သဘငျပညာရှငျမြားကိုမွောကျစားခဲ့သညျ။
မွနျမာ့ဇာတျသဘငျတှငျ သဘငျပညာရှငျမြားသညျ ပထမဦးစှာ မွဝေိုငျးစနဈဖွငျ့ စတငျပွခဲ့ကွသညျ။မွဝေိုငျးစနဈသညျ သဘငျသညျမြားက မွကွေီးပျေါတှငျ ဖြာကွမျးခငျး၍ ကပွရသော စနဈတဈခုဖွဈပသေညျ။ ထောငျ့လေးထောငျ့တှငျ ရနေံဆီမီးတိုငျမြားစိုကျထားသညျ။သဈသားဖွငျ့ပွုလုပျထားသော ဆိုငျးဝိုငျးကွီးတဈပါဝငျသညျ(ထိုခတျေက မှနျစီရှခေထြားသောဆိုငျးမှးမှာ မွနျမာနနျးတှငျမှာသာ ထားရှိသညျ)။အရပျရှဈမကျြနှာတှငျလူအမြားဝိုငျးပွီထိုငျ၍ကွညျ့ကွသညျ။တခြို့မှာ မိမိပါလာသော လှညျးပျေါမှ ထိုငျ၍ကွညျ့ကွသညျ။ကိုလိုနီခတျေရောကျသောအခါ နနျးတှငျးတှငျ ကပွခဲ့သော ဇာတျမငျးသာကွီးအီနောငျမောငျစံတုတျသညျ ဇာတျရုံကို အစောဆုံးတီထှငျဖနျတီးကာ တညျဆောကျခဲ့သညျ။သူတညျဆောကျခဲ့သောဇာတျရုံတှငျ ဇာတျခုံမပါရှိပေ။ကပွသူမှာ မွဝေိုငျးခတျေကဲ့သို့ မွကွေီးပျေါတှငျ ကပွရသညျ။စာရေးသူအမွငျပွောရလြှငျ ထိုဇာတျရုံသညျအမိုးအကာပါသော ယာယီ အဆောကျအဦးတဈခုရယျလို့သတျမှတျရလိမျ့မညျဖွဈသညျ။ထိုနျော မွနျမာဇာတျခုံကို စတငျ ဖနျတီး၍ကပွခဲ့သူတဈဦးရှိသညျ။ထိုသူမှာ ဇာတျမငျးသားကွီး ဦးဘစငျဘဲ ဖွဈသညျ။
ဤသို့ဇာတျသဘငျဟာ တဈဖွညျးဖွညျးတိုးတကျလာခဲ့ရာ ဝဏ်ဏကြျောထငျ ဂရိတျဦးဖိုးစိနျ(စိနျမဟာသဘငျ)ခတျေသို့ရောကျရှိခဲ့သညျ။ဂရိတျဦးဖိုးစိနျခတျေတှငျ လိုအပျသော ဇာတျပစ်စညျးမြားနှငျ့settingပစ်စညျးမြားကိုဖနျတီးခဲ့သညျ။ဂရိတျဦးဖိုးစိနျအိန်ဒိယမှပွနျလာပွီးနောကျ ယာယီရှကျထညျရုံကွီးတဈရုံကိုဝယျယူခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျတှငျ စတငျအသုံးခဲ့သညျ။အဲအပွငျ အောကျလငျးမီးအိမျမြား(Stormlantern)ဖွငျ့ကပွနရောမှ လသာမှနျအိမျမြား(hanging Lanterns)ဖွငျ့ပွောငျးလဲ ကပွမှုကိုလညျး စတငျတီထှငျခဲ့သညျ။ထိုနျောသူ၏ဖွဈသူဇာတျမငျးသားကွီးဦးကဲနကျစိနျကို ဇာတျသဘငျပညာရပျ(Troupe Subject) သငျယူရနျ နိုငျငံခွားသို့ ပညာတျောသငျစလှေတျခဲ့သညျ။ဦးကဲနကျစိနျ မွနျမာပွညျပွနျရောကျလာသောအခါ ပြူစောထီးအျောပရာထဲက ရှုးပြံဆိုသညျ့ ခေါငျးသုံးလုံး သတ်တဝါကွီးကိုလညျး ဆကျတကျပညာဖွငျ့ ဖနျတီးခဲ့ရာ ပရိသတျမြား လှနျစှာ သဘောကနြှဈခွိုကျခဲ့ကွသညျ။ထိုခတျေကို ဇာတျသဘငျစိနျခတျေဟု မှတျတမျးတငျအပျပါသညျ။
ဇာတျသဘငျစိနျခတျေတှငျ ဂရိတျဦးဖိုးစိနျဟာ ယောကျြားမငျးသမီး မယျအောငျဗလနှငျ့တှဲဖကျ၍ ယက်ခမယျဆိုသညျ့ နောကျပိုငျးဇာတျတျောကို စကျသီးနှငျ့ ကွိုးအသုံးပွု၍ လူကို လပေျေါတှငျပြံသနျးအောငျ ဖနျးတီခဲ့သညျ။
ဤနရောတှငျ ဦးဖိုးစိနျတို့ ဦးစိနျကတုံးတို့နှငျ့ တှဲဖကျကပွခဲ့သော ယောကျြားမငျးသမီး မယျအောငျဗလမှာ LGBT တဈယောကျမဟုတျပေ။သူတှငျ ဇနီးနှငျ့သားသမီးမြားရှိသော ယောကျြားစဈစဈ တဈယောကျသာ ဖွဈပါသညျ။ ဦးဖိုးစိနျနှငျ့ ဦးစိနျကတုံးတို့ဟာ ရှေးမွနျမာနှဈပါးသှားမြားတှငျ ကပွခဲ့သာ ပုဝါတကမျး လကျတဈလှမျးဆိုသညျ့စနဈကို အသှငျတဈမြိုးပွောငျးခငျြခဲ့သညျ။ မငျးသမီးနရောတှငျ သဘငျအမြိုးသမီးစဈစဈမြားကို အသုံးပွုလြှငျ မွနျမာအမြိုးသမီးမြားအိန်ဒွဂေုဏျသိက်ခာကို ထိခိုကျနိုငျသဖွငျ့ မငျးသမီးအတကျတှငျ တဖကျကမျးခပျ တကျမွှောကျသော ယောကျြားမငျးသမီး မယျအောငျဗလကို အသုံးပွုခဲ့သညျ။
၁၂၈ဝပွညျ့ နတျတျောလပွညျ့ကြျော၎ရကျ ၁၉၁၈ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ စနနေတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံ၏သဘငျလောကကို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျပေးခဲ့တဲ့ လူတဈဦးမှေးဖှားလာခဲ့ပါသညျ။ ထိုသူကား အလင်ျကာကြျောစှာ ရှမေနျးဦးတငျမောငျဘဲ ဖွဈပါသညျ။ ရှမေနျးဦးတငျမောငျသညျ အသကျ၁၃နှဈမှ စ၍ မငျးသားအနဖွေငျ့ ကပွလာခဲ့ရာ အသကျ၁၈နှဈအရှယျတှငျ မိမိ၏ကိုယျပိုငျဇာတျအဖှဲ့ဖွဈသော သစ်စာ မတ်ေတာ ရှမေနျးသဘငျအဖှဲ့ကွီးကို စတငျ အုတျမွဈခခြဲ့ပါသညျ။ ၁၉၃၈ခုနှဈတှငျ မငျးသားကွီးဦးစိနျကတုံး၏ မနျနဂြောဖွဈသော ဦးကြောကျဒှနျးဆီမှ ရှကျထညျရုံကွီးကို ပွနျလညျဝယျယူပွီးကပွခဲ့ပါသညျ။
ဤနရောတှငျ ထိုခတျေက ကပွခဲ့သော ရှကျထညျရုံကွီးအကွောငျးကိုလညျးရှငျးပွပါရစေ။ ရှကျထညျရုံဆိုသညျမှာ- အသငျ့ဆောကျလုပျရနျလှယျကူသော ဇာတျရုံတဈရုံသာ ဖွဈပါသညျ။ထိုဇာတျရုံ၏ အမိုးနှငျ့အကာမြားကို ရှေးကရှကျသင်ျဘောမြားတှငျ အသုံးပွုသော ရှကျဖငျြပိတျစဖွငျ့ ခြုပျလုပျထားသညျ။ ဇာတျရုံ၏အမိုးကိုတော့ (A)ပုံသဏ်ဍနျရှိသော မွငျးမိုရျပိတျအမိုး(Gable Roof)ဖွငျ့မိုးထားသညျ။တခြို့သောရှကျထညျရုံမြားတှငျ ညီညာပွနျပွူးသောအမိုး(Flat Roof)မြားကိုလညျး မိုးကားထားသညျ။
ဇာတျရုံ၏အကာသညျ အမိုးမှာမွပွေငျပျေါ (ဇာတျအပွငျဘကျ)သို့ လြော့ဇောကျပုံ ပွနျ့ကားထှကျနသေညျ။ဇာတျရုံ၏အမိုးအစှနျး( တံစကျမွိတျ) ၏ပိတျစပျေါတှငျ အပေါကျဖောကျ၍ ကှငျးမြားတပျဆငျထားသညျ။ထိုကှငျးမြားနှငျ့ ဇာတျရုံ အပွငျဘကျတှငျစိုကျထားသော ငုတျတိုငျတို့ကို ကွိုးဖွငျ့တငျးတငျးဆှဲကာ ခြိတျဆကျပေးပွီး ဇာတျရုံကိုတောငျ့တငျး ခြိတျဆကျပေးထားသညျ။ဇာတျခုံအတှငျးရှိ တိုငျမြား (Column )၊ ရကျမမြား (Beam)ကိုတော့ ဝါးပိုးဝါးမြားကို အသုံးပွုထားပါသညျ။
ဇာတျခုံ (Main Stage)ရဲ့ ဘယျဘကျခွမျးနှငျ့ ညာဘကျခွမျးတှငျ အသားပိုဇာတျခုံမြား(Side Stages) ကို သဈသားဖွငျ့ ဆောကျလုပျထားပါသညျ။ ထိုအသားပိုဇာတျခုံမြားကို မူလဇာတျခုံနှငျ့ အမွငျ့ ညီအောငျ တပွေးတညျးပွုလုပျရပါသညျ။ ယခငျကခဲ့သော အကယျြ (၁၂)စတုရနျးတောငျ အမွငျ့၂ပရှေိသောဇာတျခုံသညျ ရှမေ့ကျြနှာစာ အလြားပေ ၃၀ အနံအရှပေ့ေ၅၀ အမွငျ့၂ပခှေဲဖွငျ့ ပွောငျးလဲတညျဆောငျလာခဲ့ပါသညျ။ ပဒသောပှဲတှငျ တီးဝိုငျးကို ဇာတျခုံရှတှေ့ငျထားရသဖွငျ့ ပှဲကွညျ့သူမြားမွငျရအောငျ ဇာတျခုံအမွငျ့ ၅ပတေညျဆောကျဖနျးတီးခဲ့ကွသညျ။
မွနျမာဇာတျသဘငျသညျ တဈနှဈပတျလုံး နယျလှညျခရီးသှားကပွရသော အဖှဲအစညျးမြားဖွဈသဖွငျ့ ဇာတျရုံသညျ သဘငျအနုပညာရှငျတို့ ဒုတိယအိမျပငျဖွဈပါသညျ။
မွနျမာဇာတျသဘငျသညျ တဈနှဈပတျလုံး နယျလှညျ့ခရီးသှားကပွရသော အဖှဲအစညျးမြားဖွဈသဖွငျ့ ဇာတျရုံသညျ သဘငျအနုပညာရှငျတို့၏ ဒုတိယအိမျပငျဖွဈပါသညျ။ ထိုကွောငျ့ ဇာတျအဖှဲ့သားမြားသားနရေနျအတှကျ အခနျးမြားကို သပျရပျစှာ ဖှဲ့စညျးပေးရပါသညျ။ စာရေးသူတို့နိုငျငံတှငျ တခွားနိုငျငံမြားကဲ့သို့ Make-up Roomနဲ့ Dressing Roomကို သီးခွားခှဲမထားပေ။ ဇာတျသမားတဈဦးအတှကျ အခနျးတဈခနျးသညျ အဝတျအစားလဲဖို့ Make-up လိမျးဖို့ နဖေို့အတှကျပါ ဘကျစုံအသုံးပွုရနျ ဖနျတီးပေးထားသညျ။ အခနျးတဈခနျးကိုတော့ ပိတျကားကွီးမြားဖွငျ့ အခနျးကနျးပေးထားသညျ။ယခုနောကျပိုငျးတှငျ ခနျးစီးလိုကျကာမြားကို အသုံးပွုသညျ။
ပါဠိဘာသာအရ ဇာတျဆိုသညျမှာ စညျး(စညျးကမျး)၊ သဘငျဆိုသညျမှာအဖှဲ့အစညျးဖွဈသညျ။အနကျအဓိပ်ပါယျအရ စညျးကမျးရှိသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈသဖွငျ့ ဖြျောဖွတေငျဆကျရာတှငျလညျး စညျးကမျးရှိသလို အခနျးမြားဖှဲ့စညျးရာတှငျလညျး စညျးစနဈကလြှပသေညျ။ဇာတျအဖှဲ့တှငျ ယောကျြားလေးမြားသညျ မိနျးကလေးအခနျးမြားသို့ ကူးလူးသှားလာခှငျ့မရှိသဖွငျ့ အခနျးတိုငျးကို အပျေါအမိုးမှစ၍ အောကျခွမွေပွေငျထိတိုငျအောငျ ပိတျကားကွီးမြားဖွငျ့ကာထားသညျ။ယခုအခြိနျတှငျ အခနျးမြား၏အမွငျ့သညျ ၉ပေ သာရှိကွတော့သညျ။ ဇာတျခုံ၏ညာဘကျ (ပရိသတျဘကျကကွညျ့လြှငျ ဘယျဘကျ)တှငျ ဘုရားခနျးပါဝငျသညျ။ ထိုဘုရားခနျးသောညာဘကျခွမျးတှငျ လငျစုံမယားဖကျ တှဲ၍နပေိုငျခှငျ့မရှိပေ။နလြှေငျ ဇာတျတှငျ ပွဿနာ တဈတဈရာဖွဈပျေါတကျသညျဟု အယူအဆမြား ရှိသောကွောငျ့ဖွဈ၏။ ထိုကွောငျ့ ဇာတျအဖှဲ့တှငျ အတူတူတှဲ၍အလုပျလုပျကိုငျနသေော ဇနီးမောငျနှံမြားပါခဲ့လြှငျ ထိုသူတို့အတှကျ ဇာတျခုံ၏အနောကျဘကျနှငျ့ ဘယျဘကျခွမျးတှငျ သီးသနျ့ခနျးမြားစီစဉျပေးရသညျ။ ထိုအပွငျ တခွားသော သီးသနျ့ခနျးမြားသော ခေါငျးဆောငျမငျးသားခနျး၊ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးခနျး၊ လူရှငျတျောခေါငျးဆောငျနသေော အခနျးမြားစသညျ တို့ပါဝငျသညျ။ထိုသီးသနျ့ခနျးမြား၏အကယျြအဝနျးသညျ ၉ပပေတျလညျမှစ၍နထေိုငျသော ပုဂ်ဂိုလျ၏ ရာထူးအဆငျ့အတနျး၊ဇာတျတှငျအရေးပါမှု ပျေါမူတညျပွီး ၁၂ပေ၁၃ပထေိကယျြဝနျးသညျ။
တခွားသော ယိမျးမငျးသမီးမြား၊မငျးသားမြား၊ဇာတျအဖှဲ့သားမြားနရေနျအတှကျ လူအယောကျ၃ဝဆနျ့သော ဘုံအခနျး(hallပုံစံ) တညျဆောကျပေးထားသညျ။ထိုhallခနျးတှငျ ဇာတျသူဇာတျသားတဈဦးလြှငျ အိပျယာတဈခု Make-up လိမျးရနျနရော အဝတျသတ်ေတာမြားထားသောနရော မြားပါဝငျသညျ။တဈခြို့ဇာတျအမြားသညျ လူတဈဦးလြှငျ အခနျးတဈခနျးပေး၍ နစေသေညျ။ဇာတျအဖှဲ့လြှငျ လူအငျအား၁ဝဝကြျော ပါဝငျသဖွငျ့ အခနျးမြားလညျး မြားစှာရှိသညျ။ထိုအခနျးမြားကို သှားလာရနျအတှကျ အလညျလြှောကျလှမျးမြားကို ဝင်ျကပါပုံစံဖနျတီးထားသညျ။ လြောကျလမျး၏ဘေးတဈဖကျ တဈခကျြတှငျ ဘုံအဝတျအစားမြားထညျ့ထားသော ဇာတျသတ်ေတာမြားထားရှိသညျ။ ဘုံအဝတျအစားဆိုသညျမှာ ဝနျးကွီးမြားဆောငျးသော ဗောငျးတျော(ဦးထုတျ)မြား၊ရာဇဝငျနှငျ့ဆိုငျသောဝတျရုံမြား၊ပုလိပျဝတျစုံ၊စဈသားဝတျစုံမြားစသညျတို့ဖွဈသညျ။ထိုဝတျစုံမြားကိုဇာတျအဖှဲ့မြားလိုအပျလြှငျအလှယျတကူထားရှိပေးထားခွငျးဖွဈသညျ။ထိုအရာအားလုံးသညျ ဇာတျရုံ၏အရိပျအမွုံအတှငျးတှငျ ရှိသညျ။ဇာတျရုံ၏အနောကျဘကျသီးခွားခှဲထှကျနသေော အဆောကျအဦးမှာ စားဖိုဆောငျသာဖွဈသညျ။
ထိုစာဖိုးဆောငျတှငျ စားဖိုမှူးမြားထားရှိသော ဇာတျအဖှဲ့မြားရှိသလို တခြို့ဇာတျသဘငျမြားတှငျ ရှေးအခါက ဇာတျသမားမြားဝိုငျးဖှဲ့ပွီး ခကျြပွုတျစားသောကျသော ဟငျးလှညျ့စနဈကိုလညျး ကငျြ့သုံးသညျ။ဟငျးလှညျ့စနဈ လူရှငျတျောဟငျးလှညျ့၊ မငျးသမီးဟငျးလှညျ့၊ မငျးသားဟငျးလှညျ့၊ကားဆှဲ့အဖှဲ့၊ မီးအဖှဲ့စသညျ့ဖွငျ့ ရရကျစာအတှကျ ဇာတျဆရာမှ အဖှဲ့ရဖှဲ့ပေးထားပွီး အလှညျ့ကြ တာဝနျယူခကျြရသညျ။ လကျရှိ သဘငျတှငျ ထိုစနဈကိုကငျြ့သုံးသော အဖှဲ့တျောတျောလေး ရှားပါးသှားသညျ။ ထိုစားဖိုဆောငျ၏အကယျြမှာ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ၁၅ပပေတျလညျခနျ့ ရှိသညျ။
ထို့အပွငျ ရှကျထညျစုံရုံ၏အပွငျဘကျတှငျ မီးမြားဖွငျ့အလှဆငျထားသညျ။ဇာတျရုံ၏အရှဘေ့ကျ Gate Show(ပရိသကျမြားဝငျသောအပေါကျ)တှငျ ကပွမညျ့ အနုပညာရှငျမြား၏ ဓာတျပုံမြား၊ဇာတျအဖှဲ့နာမညျမြားကို ပနျးခြီရေးခွငျး ပိုစတာပွုလုပျခွငျးမြားဖွငျ့ကြျောငွာကွသညျ။ထိုခတျေက ဗီနိုငျးမပျေါသေးပေ။
အလင်ျကာကြျောစှာရှမေနျး(ဦး)တငျမောငျ လကျထကျသို့ရောကျသောအခါ အခနျးဖှဲ့စညျးမှုတှငျ အဖှဲ့သားဗဟုသုတရစရေနျအတှကျရညျရှယျပွီး ဇာတျရုံတှငျ စာကွညျ့တိုကျကိုပါ ထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ။
Posted by Alex Aung at 2:58 PM No comments:
Labels: နည်းပညာ, ဗဟုသုတ, သမိုင်းနှင့် မျက်မှောက်ရေးရာကဏ္ဍ
ဒီစကားလုံးက “သမီးတှကေို ပွောပွပေးပါ” ဟောပွောပှဲမှာ အနျတီဂြူး ပွောလို့ စသိခဲ့တဲ့ စကားလေး။ အဓိပ်ပါယျကတော့ Sapio ဆိုတာ ဉာဏျရညျထကျတာ၊ Sexual ဆိုတာက ဆှဲဆောငျမှု ရှိတာ။ ပွောရရငျ Intelligence is Sexy ပေါ့။ ရုပျခြောတာ၊ ဘျောဒီလှတာ၊ ခမျြးသာတာတှထေကျ အဲ့လို ဉာဏျထကျတာကို ပိုပွီး သဘောကတြဲ့သူတှကေို Sapiosexual လို့ ချေါတယျ။
Pew Research Center ရဲ့ စိတျဝငျစားစရာ စဈတမျးတဈခု ဖတျဖူးတယျ။ Gender နဲ့ ပတျသကျလို့ အမရေိကနျလူထုရဲ့ အမွငျကို မေးထားတာ။ အဲဒီမှာ စိတျဝငျစားစရာ အခကျြတှေ အမြားကွီးထဲကမှ တဈခုကို ပွောပွခငျြတယျ။ ယောကျြားတဈယောကျဆီက ဘယျလိုအခကျြတှကေို တနျဖိုးထားသလဲ၊ မိနျးမတဈယောကျဆီကနရေော ဘယျလိုအခကျြမြိုးတှေ လိုခငျြသလဲ မေးတဲ့အခါ ထှကျလာတဲ့ ရလဒျပါ။
ယောကျြားတှဆေီကနေ လိုခငျြတဲ့ ထိပျဆုံး ၃ ခကျြက
၁။ ရိုးသားမှု၊ တညျကွညျမှု (Honesty/ Morality)
၂၊ အောငျမွငျမှု၊ ငှကွေေးပွညျ့စုံမှု (Professional/ Financial success)
၃။ ရညျမှနျးခကျြကွီးခွငျး၊ ခေါငျးဆောငျနိုငျခွငျး (Ambition/ Leadership) တို့ဖွဈပွီး
၁။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဆှဲဆောငျမှုရှိဖို့ (Physical attractiveness)
၂။ ကိုယျခငျြးစာတရား၊ ပွုစုပြိုးထောငျနိုငျခွငျး၊ ကွငျနာတတျခွငျး (Empathy/ Nurturing/ Kindness)
၃။ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေး (Intelligence) တို့ ဖွဈပါတယျ။
ပွောရရငျ ကြှနျတျောတို့ဆီကနဲ့ သိပျမကှာလှဘူး။ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အမြိုးသားတဈယောကျဆီက ရိုးသားတာ၊ သစ်စာရှိတာ (ခတျေစကားနဲ့ ပွောရငျ ခွံမခုနျတာ) အလိုခငျြဆုံး။ နောကျ အရညျအခငျြးရှိတယျ၊ ပိုကျဆံခမျြးသာတယျ၊ အောငျမွငျတယျ၊ ဦးဆောငျနိုငျတယျ ဆိုတာတှကေို လိုခငျြကွတယျ။ ရုပျရညျတို့၊ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစား၊ အလှအပတို့က ဒီလောကျ မဟုတျဘူး။
အမြိုးသားတှကြေ အမြိုးသမီးဆို ရုပျလှတာ၊ ငယျရှယျတာ၊ အသားအရညျ၊ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစား ပွပွေဈအဆငျပွတောကို မကျတယျ။ နောကျ သူတို့အပျေါ နားလညျပေးတာ၊ အိမျမှုကိစ်စနိုငျတာ၊ လိုအပျသမြှ ဖွညျ့ဆညျးပေးတာ၊ ကလေးတှအေတှကျ မိခငျကောငျး ဖွဈတာတှကေို ပိုလိုခငျြကွတယျ။
အဲဒီမှာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက Intelligence ပဲ။ အောငျမွငျမှ၊ ပိုကျဆံရှိမှ၊ ဦးဆောငျနိုငျမှုတော့ မဟုတျပမေဲ့ ဉာဏျရညျမွငျ့တာကိုတော့ လိုခငျြကွသတဲ့။
တဈခါကလညျး ကြှနျတေျာ့ပခြေျ့ကတဆငျ့ ညီမလေးတဈယောကျ လာတိုငျပငျဖူးတယျ။ သူ့ရညျးစားက သူ့ကို အသုံးမကလြို့ လို့ ပွောပွီး ဖွတျသှားပါတယျတဲ့။ အဲ့ဒါ ဘယျလိုဆကျလုပျရမလဲတဲ့။ အကွံပေးရတော့ ခကျသား။ ဒါမြိုးက မိနျးကလေးအခငျြးခငျြးဆိုရငျတော့ နငျ့ကို တမငျအကွောငျးပွပွီး ဖွတျတာလို့ ပွောမှာပေါ့။ တကယျလညျး ဟုတျကောငျးဟုတျနိုငျပမေဲ့ ခုလိုမြိုး Sapiosexual ဖွဈနတောလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပွနျတယျ။
အဲ့လို Sapiosexual တှဟော ရုပျခြောတာ၊ အပြိုစဈတာ၊ ပိုကျဆံရှိတာတှထေကျ ထကျမွကျတာ၊ တျောတာ၊ အရညျအခငျြးရှိတာကို ပိုသဘောကကြွတယျ။ Date ကွမယျဆိုလညျး အပွနျအလှနျ စကားပွောလို့ကောငျးတာ၊ အမွငျကယျြတာ၊ ဖလှယျစရာ အတှအေ့ကွုံတှေ ရှိနတောကို ပိုမကျကွတယျ။ စာအုပျတှအေကွောငျး ပွောမယျ၊ ကမ်ဘာကွီးအကွောငျး ဆှေးနှေးမယျ၊ သူ့အလုပျ ကိုယျ့အလုပျအကွောငျးတှေ ဝမြှေကွမယျ။ တုံးတာ၊ ပိနျးတာ၊ ပငျြးတာတှကေို ဘယျလိုမှ ခံနိုငျရညျ မရှိကွဘူး။
တကယျတမျး တှေးကွညျ့ရငျလညျး ကိုယျ့လကျတှဲဖျောမှာ Intelligence ရှိဖို့ဟာ သိပျအရေးကွီးတယျ။
စဉျးစားကွညျ့၊ ကိုယျက ကြောငျးသား။ စာတှကွေိုးစားမယျ၊ နိုငျငံခွားကြောငျးဆကျတကျဖို့တှေ ရညျမှနျးခကျြ ကွီးကွီးထားမယျ။ အဲ့မှာ ကိုယျကွိုကျမိလိုကျတဲ့ ရညျးစားက စာမလုပျခငျြ၊ ရညျမှနျးခကျြက မရှိ၊ တျောကွာနေ ဟိုဟာစားခငျြလို့ ပူဆာပွနျ၊ တျောကွာနေ လာတှခေို့ငျး၊ တျောကွာနေ စိတျကောကျ လုပျနကွေညျ့၊ ကိုယျ ဘယျလိုမှ စာမကကျြနိုငျဘူး။ ကွာလကွောလေ စိတျပကျြလာလပေဲ။
နောကျပွီး ကြှနျတေျာ့အမွငျအရ အလှနျအကြှံ သဝနျတို၊ ပွဿနာရှာသူတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျလညျး အမြားစုက အလုပျမရှိတာ၊ ပညာအားနညျးတာ သတိထားမိတယျ။ တကယျတော့ ဂဝြေငျတယျဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လေးစားမှု အားနညျးသူတှမှော အဖွဈမြားတယျ။ အဲ့လို Self-esteem ပြောကျနတေဲ့အခါ မွငျမွငျသမြှက သဝနျတိုခငျြစရာခညျြး ဖွဈနတေယျ။ ကိုယျ့ရညျးစား၊ ကိုယျ့ယောကျြား မကျြနှာပကျြရမလား ဘာညာ မစဉျးစားတော့ဘူး။
ကိုယျက သိပျခမျြးသာတဲ့ လုပျငနျးရှငျ၊ ခြောတဲ့၊ လှတဲ့ မိနျးကလေးကို လကျထပျလိုကျတယျ၊ သူ့လကျကိုတှဲပွီး ပှဲတှတေကျတယျ။ စမွငျမွငျခငျြးတော့ ဟာ လိုကျဖကျလိုကျတာ နနေဲ့လ ရှနေဲ့မွပေါ့။ နောကျ စားပှဲမှာထိုငျပွီး စကားတှလေညျး ပွောကွရော။ ပေါကျတတျကရတှပွေော၊ နိုငျငံခွားသားဆို ရယျပဲပွနရေ၊ ဒါဆိုလညျး ကွာရငျ စိတျပကျြစရာ ဖွဈလာမှာပဲ။ နောကျပိုငျး ပှဲလမျးသဘငျဆို ချေါမလာတော့ဘူး ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈလာလိမျ့မယျ။
ကလေးရသှားရငျလညျး အဲဒီလိုပဲ။ အပွငျအလုပျလုပျရလို့ မဟုတျ၊ မိခငျနို့ကို ၆ လတိုကျလညျး ရနိုငျပါရကျနဲ့ ၃-၄ လလောကျကတညျးက ရတှေတေိုကျ၊ ထမငျးတှကြှေေး၊ ဆိုလိုတာက အသိပညာ အားနညျးတာပေါ့။ နောကျပိုငျး ပွုစုပြိုးထောငျတဲ့အခါမှာလညျး ပွဿနာတှေ ရှိလာလိမျ့မယျ။
နောကျဆုံး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အဆငျမပွလေို့ ကှဲကွရငျတောငျ ဖစျေ့ဘှတျပျေါတငျပွီး အရှကျခှဲတာတှေ မလုပျဘူး။ ကြှနျတေျာ့ပတျဝနျးကငျြမှာ မွငျဖူးတယျ။ ရိုးရိုးတောငျမဟုတျ၊ ယောကျြားက ဖောကျပွနျလို့ ကှဲရတာ။ အဲဒါကိုတောငျ အသာတကွညျပဲ ဒီအခွအေနကေို ကိုငျတှယျသှားတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီး။ ဖစျေ့ဘှတျပျေါ လူသိရှငျကွား ဖွဈဖို့ မပွောနဲ့။ ရငျးနှီးသူတှတေောငျ မသိလိုကျကွဘူး။ ကလေးတှမှောလညျး အဖနေဲ့အမသော ကှဲသှားတယျ၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ တဈနညျးအားဖွငျ့တော့ စိတျခံစားခကျြကို ရှတေ့နျးမတငျဘူး။ လူကွီးလူကောငျးဆနျတယျ။ EQ မွငျ့တယျပေါ့။ အဲ့လိုမိခငျမြိုးတှေ တှရေ့တဲ့အခါ အတျောလေး သဘောကရြတယျ။
အမြိုးသမီးတှကေတော့ နဂိုကတညျးကိုက အသုံးမကတြဲ့ ယောကျြားဆို စိတျဝငျစားမှု နညျးကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့လညျး ရှိပါတယျ။ ရုပျခြောခြော၊ တျောကီကောငျးကောငျး ကောငျလေးတှကေို သဘောကမြိတာမြိုး၊ မတျမတျကပဲ မောငျလေးဘဝကို အသဈပွနျလညျဖနျဆငျးပေးမယျ ဆိုတာမြိုးတှပေေါ့။ အဲ့လိုဇာတျလမျးတှဆေိုလညျး ကွညျ့ကွညျ့ပါ။ အမြားစုက ပွိုကှဲသှားကွတာမြားတယျ။ ဘာလို့ဆို အဲ့လို ပညာမတတျလို့၊ ပိနျးလို့ လူပုံအလယျ အရှကျကှဲ၊ မကျြနှာပကျြရတာကွီးက တဈခါက နှဈခါ သညျးခံဖို့ဆိုတာ မလှယျလို့ပဲ။ ဉာဏျရညျက အားနညျးတဲ့အတှကျ တှေးပုံချေါပုံကိုက အစ ကိုယျနဲ့ မတူဘူး။ ကိုယျ့အသိုငျးအဝိုငျးထဲလညျး သူက မဝငျဆံ့သလို၊ သူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာလညျး ကိုယျက နလေို့မပြျော။
ပွောခငျြတာကတော့ ဉာဏျရညျမွငျ့တဲ့ လကျတှဲဖျောဟာ ဘယျလောကျအရေးကွီးသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ နောကျပွီး လှတာနဲ့ Personality ကောငျးတာနဲ့က မတူပါဘူး။ လူက ဉာဏျရညျမွငျ့တယျ၊ ပညာတတျတယျ၊ အလုပျအကိုငျ၊ အရညျအခငျြးရှိတယျဆိုရငျ ရုပျက ဒီလောကျမလှတောငျ Personality တကျလာတာပဲ။ ရုပျရညျတို့၊ ခန်ဓာကိုယျ အလှအပတို့ဆိုတာကလညျး ငယျဂုဏျနဲ့လညျး ဆိုငျသေးတာကိုး။ ပညာကတော့ ပကျြစီးယိုယှငျးမလှယျဘူးလေ။
ယောကျြားတှေ သဘောကတြာ ခံရဖို့ ဉာဏျကောငျးအောငျ လုပျပါ၊ ပညာကွိုးစားပါလို့ ပွောနတောတော့ မဟုတျဘူး။ (အဲ့လိုထငျမိတယျဆိုလညျး ကိုယျဟာ Sapiosexual တှနေဲ့ အဆငျမပွလေောကျဘူးလို့ သိထားပေးပါ) အဓိက ရညျရှယျတာက လူငယျတှေ ကိုယျ့ဘဝကိုယျ တညျဆောကျတဲ့အခါ ဘယျဟာကို ဦးစားပေး ဖှံ့ဖွိုးအောငျလုပျရမယျဆိုတာ သိဖို့ရယျ၊ ယောကျြားပဲဖွဈဖွဈ၊ မိနျးမပဲဖွဈဖွဈ Sapiosexual ဖွဈသညျဖွဈစေ၊ မဖွဈသညျဖွဈစေ၊ ကိုယျ့လကျတှဲဖျော ရှေးခယျြတဲ့အခါ Intelligence ကို အရေးကွီးအခကျြတဈခကျြအနနေဲ့ ထညျ့စဉျးစားကွဖို့ရယျပါ။
1) On Gender Differences, No consensus on nature vs nurture – Pew Research Center
2) 12 signs you areasapiosexual – January Nelson
ဒီစကားလုံးက “သမီးတွေကို ပြောပြပေးပါ” ဟောပြောပွဲမှာ အန်တီဂျူး ပြောလို့ စသိခဲ့တဲ့ စကားလေး။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Sapio ဆိုတာ ဉာဏ်ရည်ထက်တာ၊ Sexual ဆိုတာက ဆွဲဆောင်မှု ရှိတာ။ ပြောရရင် Intelligence is Sexy ပေါ့။ ရုပ်ချောတာ၊ ဘော်ဒီလှတာ၊ ချမ်းသာတာတွေထက် အဲ့လို ဉာဏ်ထက်တာကို ပိုပြီး သဘောကျတဲ့သူတွေကို Sapiosexual လို့ ခေါ်တယ်။
Pew Research Center ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ စစ်တမ်းတစ်ခု ဖတ်ဖူးတယ်။ Gender နဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်လူထုရဲ့ အမြင်ကို မေးထားတာ။ အဲဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေ အများကြီးထဲကမှ တစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီက ဘယ်လိုအချက်တွေကို တန်ဖိုးထားသလဲ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ဆီကနေရော ဘယ်လိုအချက်မျိုးတွေ လိုချင်သလဲ မေးတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ပါ။
ယောကျာ်းတွေဆီကနေ လိုချင်တဲ့ ထိပ်ဆုံး ၃ ချက်က
၁။ ရိုးသားမှု၊ တည်ကြည်မှု (Honesty/ Morality)
၂၊ အောင်မြင်မှု၊ ငွေကြေးပြည့်စုံမှု (Professional/ Financial success)
၃။ ရည်မှန်းချက်ကြီးခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်ခြင်း (Ambition/ Leadership) တို့ဖြစ်ပြီး
၁။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့ (Physical attractiveness)
၂။ ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခြင်း၊ ကြင်နာတတ်ခြင်း (Empathy/ Nurturing/ Kindness)
၃။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး (Intelligence) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကနဲ့ သိပ်မကွာလှဘူး။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆီက ရိုးသားတာ၊ သစ္စာရှိတာ (ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရင် ခြံမခုန်တာ) အလိုချင်ဆုံး။ နောက် အရည်အချင်းရှိတယ်၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်၊ အောင်မြင်တယ်၊ ဦးဆောင်နိုင်တယ် ဆိုတာတွေကို လိုချင်ကြတယ်။ ရုပ်ရည်တို့၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား၊ အလှအပတို့က ဒီလောက် မဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသားတွေကျ အမျိုးသမီးဆို ရုပ်လှတာ၊ ငယ်ရွယ်တာ၊ အသားအရည်၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပြေပြစ်အဆင်ပြေတာကို မက်တယ်။ နောက် သူတို့အပေါ် နားလည်ပေးတာ၊ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်တာ၊ လိုအပ်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးတာ၊ ကလေးတွေအတွက် မိခင်ကောင်း ဖြစ်တာတွေကို ပိုလိုချင်ကြတယ်။
အဲဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Intelligence ပဲ။ အောင်မြင်မှ၊ ပိုက်ဆံရှိမှ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့်တာကိုတော့ လိုချင်ကြသတဲ့။
တစ်ခါကလည်း ကျွန်တော့်ပေ့ခ်ျကတဆင့် ညီမလေးတစ်ယောက် လာတိုင်ပင်ဖူးတယ်။ သူ့ရည်းစားက သူ့ကို အသုံးမကျလို့ လို့ ပြောပြီး ဖြတ်သွားပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲတဲ့။ အကြံပေးရတော့ ခက်သား။ ဒါမျိုးက မိန်းကလေးအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ နင့်ကို တမင်အကြောင်းပြပြီး ဖြတ်တာလို့ ပြောမှာပေါ့။ တကယ်လည်း ဟုတ်ကောင်းဟုတ်နိုင်ပေမဲ့ ခုလိုမျိုး Sapiosexual ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။
အဲ့လို Sapiosexual တွေဟာ ရုပ်ချောတာ၊ အပျိုစစ်တာ၊ ပိုက်ဆံရှိတာတွေထက် ထက်မြက်တာ၊ တော်တာ၊ အရည်အချင်းရှိတာကို ပိုသဘောကျကြတယ်။ Date ကြမယ်ဆိုလည်း အပြန်အလှန် စကားပြောလို့ကောင်းတာ၊ အမြင်ကျယ်တာ၊ ဖလှယ်စရာ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိနေတာကို ပိုမက်ကြတယ်။ စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောမယ်၊ ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်၊ သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ်အကြောင်းတွေ ဝေမျှကြမယ်။ တုံးတာ၊ ပိန်းတာ၊ ပျင်းတာတွေကို ဘယ်လိုမှ ခံနိုင်ရည် မရှိကြဘူး။
တကယ်တမ်း တွေးကြည့်ရင်လည်း ကိုယ့်လက်တွဲဖော်မှာ Intelligence ရှိဖို့ဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်။
စဉ်းစားကြည့်၊ ကိုယ်က ကျောင်းသား။ စာတွေကြိုးစားမယ်၊ နိုင်ငံခြားကျောင်းဆက်တက်ဖို့တွေ ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားမယ်။ အဲ့မှာ ကိုယ်ကြိုက်မိလိုက်တဲ့ ရည်းစားက စာမလုပ်ချင်၊ ရည်မှန်းချက်က မရှိ၊ တော်ကြာနေ ဟိုဟာစားချင်လို့ ပူဆာပြန်၊ တော်ကြာနေ လာတွေ့ခိုင်း၊ တော်ကြာနေ စိတ်ကောက် လုပ်နေကြည့်၊ ကိုယ် ဘယ်လိုမှ စာမကျက်နိုင်ဘူး။ ကြာလေကြာလေ စိတ်ပျက်လာလေပဲ။
နောက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်အရ အလွန်အကျွံ သဝန်တို၊ ပြဿနာရှာသူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အများစုက အလုပ်မရှိတာ၊ ပညာအားနည်းတာ သတိထားမိတယ်။ တကယ်တော့ ဂျေဝင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှု အားနည်းသူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ အဲ့လို Self-esteem ပျောက်နေတဲ့အခါ မြင်မြင်သမျှက သဝန်တိုချင်စရာချည်း ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစား၊ ကိုယ့်ယောက်ျား မျက်နှာပျက်ရမလား ဘာညာ မစဉ်းစားတော့ဘူး။
ကိုယ်က သိပ်ချမ်းသာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်၊ ချောတဲ့၊ လှတဲ့ မိန်းကလေးကို လက်ထပ်လိုက်တယ်၊ သူ့လက်ကိုတွဲပြီး ပွဲတွေတက်တယ်။ စမြင်မြင်ချင်းတော့ ဟာ လိုက်ဖက်လိုက်တာ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြပေါ့။ နောက် စားပွဲမှာထိုင်ပြီး စကားတွေလည်း ပြောကြရော။ ပေါက်တတ်ကရတွေပြော၊ နိုင်ငံခြားသားဆို ရယ်ပဲပြနေရ၊ ဒါဆိုလည်း ကြာရင် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်လာမှာပဲ။ နောက်ပိုင်း ပွဲလမ်းသဘင်ဆို ခေါ်မလာတော့ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ကလေးရသွားရင်လည်း အဲဒီလိုပဲ။ အပြင်အလုပ်လုပ်ရလို့ မဟုတ်၊ မိခင်နို့ကို ၆ လတိုက်လည်း ရနိုင်ပါရက်နဲ့ ၃-၄ လလောက်ကတည်းက ရေတွေတိုက်၊ ထမင်းတွေကျွေး၊ ဆိုလိုတာက အသိပညာ အားနည်းတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါမှာလည်း ပြဿနာတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆင်မပြေလို့ ကွဲကြရင်တောင် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တင်ပြီး အရှက်ခွဲတာတွေ မလုပ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်ဖူးတယ်။ ရိုးရိုးတောင်မဟုတ်၊ ယောက်ျားက ဖောက်ပြန်လို့ ကွဲရတာ။ အဲဒါကိုတောင် အသာတကြည်ပဲ ဒီအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ဖို့ မပြောနဲ့။ ရင်းနှီးသူတွေတောင် မသိလိုက်ကြဘူး။ ကလေးတွေမှာလည်း အဖေနဲ့အမေသာ ကွဲသွားတယ်၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ စိတ်ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘူး။ လူကြီးလူကောင်းဆန်တယ်။ EQ မြင့်တယ်ပေါ့။ အဲ့လိုမိခင်မျိုးတွေ တွေ့ရတဲ့အခါ အတော်လေး သဘောကျရတယ်။
အမျိုးသမီးတွေကတော့ နဂိုကတည်းကိုက အသုံးမကျတဲ့ ယောက်ျားဆို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့လည်း ရှိပါတယ်။ ရုပ်ချောချော၊ တော်ကီကောင်းကောင်း ကောင်လေးတွေကို သဘောကျမိတာမျိုး၊ မတ်မတ်ကပဲ မောင်လေးဘဝကို အသစ်ပြန်လည်ဖန်ဆင်းပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အဲ့လိုဇာတ်လမ်းတွေဆိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါ။ အများစုက ပြိုကွဲသွားကြတာများတယ်။ ဘာလို့ဆို အဲ့လို ပညာမတတ်လို့၊ ပိန်းလို့ လူပုံအလယ် အရှက်ကွဲ၊ မျက်နှာပျက်ရတာကြီးက တစ်ခါက နှစ်ခါ သည်းခံဖို့ဆိုတာ မလွယ်လို့ပဲ။ ဉာဏ်ရည်က အားနည်းတဲ့အတွက် တွေးပုံခေါ်ပုံကိုက အစ ကိုယ်နဲ့ မတူဘူး။ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းထဲလည်း သူက မဝင်ဆံ့သလို၊ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်း ကိုယ်က နေလို့မပျော်။
ပြောချင်တာကတော့ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ လက်တွဲဖော်ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ပြီး လှတာနဲ့ Personality ကောင်းတာနဲ့က မတူပါဘူး။ လူက ဉာဏ်ရည်မြင့်တယ်၊ ပညာတတ်တယ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုရင် ရုပ်က ဒီလောက်မလှတောင် Personality တက်လာတာပဲ။ ရုပ်ရည်တို့၊ ခန္ဓာကိုယ် အလှအပတို့ဆိုတာကလည်း ငယ်ဂုဏ်နဲ့လည်း ဆိုင်သေးတာကိုး။ ပညာကတော့ ပျက်စီးယိုယွင်းမလွယ်ဘူးလေ။
ယောက်ျားတွေ သဘောကျတာ ခံရဖို့ ဉာဏ်ကောင်းအောင် လုပ်ပါ၊ ပညာကြိုးစားပါလို့ ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ (အဲ့လိုထင်မိတယ်ဆိုလည်း ကိုယ်ဟာ Sapiosexual တွေနဲ့ အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ သိထားပေးပါ) အဓိက ရည်ရွယ်တာက လူငယ်တွေ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် တည်ဆောက်တဲ့အခါ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိဖို့ရယ်၊ ယောကျာ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် Sapiosexual ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်လက်တွဲဖော် ရွေးချယ်တဲ့အခါ Intelligence ကို အရေးကြီးအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ထည့်စဉ်းစားကြဖို့ရယ်ပါ။
☞ ရေခဲသေတ္တာရွေးချယ်ဝယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ ☜
ရေခဲသေတ္တာဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေသလိုဝယ်ယူတာမျိုးထက် သေချာမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်ခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးရေရှည်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ☻
ဒါကြောင့် ရေခဲသေတ္တာရွေးချယ်ဝယ်ယူရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ✍
အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်အရေအတွက်၊ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အ‌ကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး မှန်ကန်တဲ့အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ✔
တွက်နည်း ➪ မိသားစုဝင်အရေအတွက် x 70 လီတာ၊ မရှိမဖြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပမာဏ(100 မှ 150 လီတာ) + ရှိသင့်တဲ့နေရာလွတ်ပမာဏ (70 လီတာခန့်)
ဥပမာ မိသားစုဝင်နှစ်ယောက်ရှိပါက 2x70လီတာ + 100မှ150လီတာ + 70လီတာ = 360လီတာ
မိသားစုဝင်ငါးယောက်ရှိပါက 5×70လီတာ + 100မှ150လီတာ + 70လီတာ = 570လီတာ စတဲ့တွက်နည်းအတိုင်းတွက်လို့ရပါတယ် ✔
ကိုယ်ထားချင်တဲ့ရေခဲသေတ္တာနေရာကို တိုင်းတာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းသည့်အခါမှာ တံခါးဖွင့်သည့်အကျယ်၊ ဘေးထွက်သည့်နေရာ၊ လေဝင်လေထွက်အတွက် ဘေးနှစ်ဖက်ကို (၅)စင်တီမီတာနဲ့ အပေါ်နဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းကို( ၁၀)စင်တီမီတာနေရာလွတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ✔
အပူချိန်၊လေနဲ့စိုထိုင်းမှုတွေက အစားအစာတာရှည်ခံဖို့နဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်း လေလုံတဲ့စနစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားပေးခြင်းက အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ ရေခဲသေတ္တာအတွင်း သိုလှောင်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကို တာရှည်ခံအောင်လုပ်ပေးခြင်းစတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ✔
(၂) အခုတခါမှာတော့ ‌ရေခဲသေတ္တာအသုံးပြုနေသူတွေအတွက် ရေခဲသေတ္တာကို လွယ်လွယ်ကူကူသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းအကြောင်းလေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို စနစ်တကျအသုံးပြုပေးသင့်သလို ပုံမှန်သန့်ရှင်း‌ရေးလည်းလုပ်ပေးမှသာ ပစ္စည်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကျဆင်းမသွားပဲ ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဆိုတာ လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာကတော့
1. အပြင်ဖက်မျက်နှာပြင်ကို စတင်သန့်ရှင်းပါ
သန့်ရှင်းနူးညံ့တဲ့အဝတ်ကိုယူပြီး ရေခဲသေတ္တာအပြင်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုအရင်ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းပေးပါ။ ရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်မှာ ပွန်းရာခြစ်ရာတွေထင်နိုင်တာမို့ တိုက်တဲ့အခါမှာ နူးညံ့တဲ့အရာတွေနဲ့သာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ဖယ်ရှားသန့်ရှင်းဖို့သိပ်မလွယ်တဲ့ဖုန်အညစ်အကြေးတွေကပ်မိနေပါက ရေများများနဲ့ သို့မဟုတ် PHသန့်စင်ဆပ်ပြာရည်တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရက်လွန်သွားတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ မစားသုံးသင့်တော့တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို စိတ်သန့်သန့်နဲ့သာ လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်တာက နောက်ထပ် ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်တွေအတွက် နေရာပိုရသွားနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ယာယီသိမ်းဆည်းထားချင်တဲ့အစားအစာတွေကို အအေးဓာတ်ပေးထားလို့ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပလပ်ဖြုတ်ထားပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကိုချွေတာနိုင်ပါတယ်။
တံခါးလိုင်နာ၊ သစ်သီးထည့်တဲ့အံဆွဲတွေနဲ့ ကြက်ဉတွေတင်တဲ့ စင်တွေကို သန့်ရှင်း‌ရေးလုပ်တဲ့အခါ
နူးညံ့တဲ့အဝတ်ကိုရေ‌နွေး(နွေးရုံလောက်သာ) ဖြင့်ဆွတ်ပြီးအသုံးပြုပေးပါ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ တံခါးဘောင်၊ စင်၊တန်းတွေကို လေအေးနဲ့အခြောက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းသက်တမ်းပေါ်မူတည်ပြီး စီပေးပါ။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို ‌ရေခဲသေတ္တာရဲ့ အနွေးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ အတွင်းဖက်တံခါးဘောင်က စင်တွေပေါ်မှာ ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဒီနေ့မှာတော့ အဝတ်လျှော်စက်များကို ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရလည်းဆိုတာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်
◾Auto Self Clean ပါဝင်သော Hitachi အဝတ်လျှော်စက်များ
Auto Self Clean ပါတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်လေးတွေ က အဝတ်လျှော်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ရေပိုက်မှကျလာတဲ့ရေသန့်နဲ့ အဝတ်လျှော်ကန်ရဲ့ အပြင်ဘက်မှ အညစ်အကြေးတွေကို အဝတ်ဆေး(Rinse) ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သန့်ရှင်းပေးပါတယ်ရှင် ။
ဒီခလုတ်လေးကို ကန်သန့်ရှင်းသွားအောင် အဝတ်လျှော်တဲ့အခါတိုင်းဖွင့်ထားပေးရပါမယ်နော် 💁
◾Auto Self Clean မပါသော Hitachi အဝတ်လျှော်စက်များ (သို့မဟုတ်) အခြားသောပုံမှန် အဝတ်လျှော်စက်များ
Auto Self Clean မပါတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်တွေမှာဆိုရင်တော့ Tab Clean function ကို အဝတ်လျှော်ကန် သန့်ရှင်းရေးအတွက်2လကနေ3လကြားတစ်ခါ ကန်ဆေးရည်လေးနဲ့ ပုံမှန်လေးအသုံးပြုပေးရပါတယ်နော် ။
မှို ၊ ပိုးမွှားတွေ ကင်းစင်သွားအောင် 150 ကနေ 180 မိနစ်အထိ (ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းပြီးသား ) လည်ပတ်ပေးရင် ရပါပြီရှင် 💁
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ နည်းလေးအတိုင်း လုပ်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်တွေကို cleaning လုပ်ကြမယ်နော် 😄
မည်သည့်Microwave ကိုမဆို လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါးပါး သန့်ရှင်းနည်းအကြောင်းလေးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ စားပြီးသား လိမ္မော်ခွံတွေက အမှိုက်ပစ်ဖို့သက်သက်မဟုတ်ပဲ ဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလားရှင့်။ လူကြီးမင်းတို့အိမ်တွေမှာ Microwave ကိုအသုံးပြုနေပါက ခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကအသုံးဝင်မှာအသေအချာပါပဲနော်။
1. ပထမဦးဆုံး လိမ္မော်သီးလေးတွေကို အခွံခွာပါ။
2. ပြီးရင် လိမ္မော်သီးခွံကို ‌‌ရေအနည်းငယ်နဲ့အတူ မိုက်ခရိုဝေ့ပေါ် ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
4. လိမ္မော်သီးခွံတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဝတ်သန့်သန့်နဲ့သုတ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတဲ့ Microwave လေးဖြစ်သွားပါပြီနော်။
အားလုံးပဲ ခုပြောပြပေးလိုက်တဲ့အချက်တွေအတိုင်း နည်းစနာယူပြီးအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါစေရှင့်။ဒါ့အပြင် ကျွန်မတို့ Hitachi မှာလည်း Microwave တွေကို ဈေးနှုန်းအသင့်တင့်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါ¬ကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
မိတ်ဆွေတို့အတွက် မလိုအပ်ပဲရေများကိုအသုံးပြုမိတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် မှတ်ရလွယ်ကူတဲ့ အချက်လေး(5)ချက်နဲ့ ပြောပြပေးသွားပါမယ်နော် 👇
1. အဝတ်လျှော်စက်ကတဆင့် မလိုအပ်ပဲရေမဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းကြမယ် ✨
အဝတ်လျှော်တဲ့ အခါမှာ အဝတ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့အချိန်လျှော်တာထက် အဝတ်များတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတည်းလျှော်တာက ရေကိုပိုပြီးချွေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလား ?
အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ အဝတ်အထည်တွေလျှော်တဲ့အခါမှာ ထည့်ရတဲ့ရေပမာဏက ကွာခြားမှုအများကြီးမရှိတာကြောင့် အဝတ်အထည်နဲနဲလေးနဲ့ ရေကိုထပ်ခါထပ်ခါ ထည့်ပြီးအသုံးပြုနေတာထက် အဝတ်အထည်ကိုများများစုထားပြီး လျှော်ပေးရင် မလိုလားအပ်ပဲရေတွေကို မသုံးမိတော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေလည်းရေကိုချွေတာရာရောက်တာပေါ့နော် ။
2. အဝတ်လျှော်စက်ရွေးချယ်ရင်းနဲ့လည်း မလိုအပ်ပဲရေမဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းကြမယ် ✨
အဝတ်လျှော်စက်တွေမှာ အဝတ်ထည့်တဲ့နေရာလေးတွေရှိကြတယ်နော် လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ အဝတ်ထည့်တံခါးပေါက်လေးပေါ့နော် ။ အာ့လိုတံခါးပေါက်လေးတွေက အဝတ်လျှော်စက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာပါတဲ့စက်(top loading washer)တွေရှိသလို အရှေ့ဘက်မျက်နှာစာမှာလည်းပါတဲ့စက်(front loading washer)တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီလို အမျိုးအစားနှစ်ခုမှာ နှစ်ခုလုံးကောင်းမွန်ပေမယ့် front loading washer လေးတွေကပိုပြီးရေချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်နော် ။ အကြောင်းအရင်းလေးကတော့ American media website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CNET မှ top loading စက်လေးက ရေ67L သုံးစွဲရပြီး front loading စက်လေးကတော့ရေ 32L သာအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းကို စမ်းသပ်ပြသခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ။ ဒါ့ကြောင့် မလိုလားအပ်ပဲ ရေအသုံးများမှုကိုလျော့ချရာမှာလည်း အဝတ်လျှော်စက်ကို ရွေးချယ်ရင်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ရှင် ။
3. ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ ရေယိုပေါက်တွေကို စစ်ဆေးရင်း မလိုအပ်ပဲ ရေမဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းကြမယ် ✨
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ရေစက်လေးတွေတစ်စက်တစ်စက်နဲ့ ရေယိုနေတဲ့နေရာတွေ ရေစိမ့်ထွက်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေတတ်တာ သတိထားမိကြမှာပေါ့နော် ။ အာ့လိုရေယိုစိမ့်မှုတွေကအများအားဖြင့် ဘုံဘိုင်ခေါင်းနဲ့သန့်စင်ခန်းတွေမှာအဖြစ်များတတ်ကြပါတယ် ။ အာ့လိုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအိမ်တစ်အိမ်မှာတစ်နေ့ကို 800L လောက်ရေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မလိုလားအပ်ပဲရေတွေကိုမဖြုန်းတီးမိစေဖို့ ရေယိုပေါက်တွေ ရေစိမ့်ပေါက်တွေကို စစ်ဆေးရင်းချွေတာကြမယ်နော် ။
4. အပင်လေးတွေအတွက်အသုံးပြုရင်း မလိုအပ်ပဲ ရေမဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းကြမယ် ✨
အိမ်ထောင်ရှင်မလေးတွေအနေနဲ့ အသီးအနှံတွေကိုဆေးကြောတဲ့အချိန်မှာ ဘေစင် ဒါမှမဟုတ် ဇလုံ စတာမျိုးကို အသီးအနှံတွေအောက်မှာ ခံထားရင်း ရေကိုချွေတာနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလား ?
လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအနှံတွေကို အသာအယာပွတ်ပြီး ဆေးကြောတဲ့ အခါမှာ တစ်မိနစ်ကိုရေ 10L အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာဘယ်လိုချွေတာနိုင်လဲဆိုတော့ ဆေးနေတဲ့အသီးတွေကိုဇလုံနဲ့ခံထားပြီး အသီးဆေးပြီးရရှိလာတဲ့ရေတွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ အပင်လေးတွေကိုရေလောင်းပေးတဲ့ နေရာမှာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင် ။ အသီးတွေဆေးရာမှာ ဇလုံနဲ့ရေကိုမခံထားဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မိနစ်ကို ရေ10Lဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ် ။ အာ့လိုဇလုံလေးတွေခံပြီးရေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပေးခြင်းက အပင်လေးတွေအတွက်လည်း ကောင်းမွန်သလို ရေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေချွေတာရာရောက်တာပေါ့နော် ။
5. ရေချွေတာနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်သတ်မှတ်ချက်တွေပါရှိတဲ့ အဝတ်လျှော်စက်များကိုအသုံးပြုရင်း မလိုအပ်ပဲ ရေမဆုံးရှုံးအောင်ထိန်းသိမ်းကြမယ် ✨
အဆင့်မြင့်သတ်မှတ်ချက် 3-ticks နဲ့ 4-ticks ရဲ့ကွာဟချက်ဟာဆိုရင် အဝတ်လျှော်စက်တွေမှာ အဝတ်တစ်ခါလျှော်ပြီးတိုင်း ပုံမှန်ထက်ရေသုံးစွဲမှု 3L ပိုမိုသက်သာတာကြောင့် မလိုအပ်ပဲရေဆုံးရှုံးနေမှုတွေအတွက် ထိန်းသိမ်းရာလည်းရောက်ပါတယ်ရှင် ။
ခုsharingလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မလိုအပ်ပဲရေကိုမဆုံးရှုံးအောင် လွယ်လွယ်ကူကူထိန်းသိမ်းနိုင်ပါပြီနော် 😄
အောက်ပါ link ထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီး Hitachi Products များကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင် 👇🏻
☞ ရခေဲသတ်ေတာရှေးခယျြဝယျယူရနျအကောငျးဆုံးနညျးလမျးမြား ☜
ရခေဲသတ်ေတာဝယျယူတဲ့အခါမှာ အဆငျပွသေလိုဝယျယူတာမြိုးထကျ သခြောမှနျမှနျကနျကနျရှေးခယျြဝယျယူတတျခွငျးက ပိုမိုကောငျးမှနျပွီးရရှေညျအဆငျပွနေိုငျပါတယျ ☻
ဒါကွောငျ့ ရခေဲသတ်ေတာရှေးခယျြဝယျယူရနျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးလေးတှကေို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ✍
အိမျမှာရှိတဲ့ မိသားစုဝငျအရအေတှကျ၊ ဈေးဝယျထှကျတဲ့အ‌ကွိမျအရအေတှကျပျေါမူတညျပွီး မှနျကနျတဲ့အရှယျအစားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ ✔
တှကျနညျး ➪ မိသားစုဝငျအရအေတှကျ x 70 လီတာ၊ မရှိမဖွဈထားတဲ့ပစ်စညျးပမာဏ(100 မှ 150 လီတာ) + ရှိသငျ့တဲ့နရောလှတျပမာဏ (70 လီတာခနျ့)
ဥပမာ မိသားစုဝငျနှဈယောကျရှိပါက 2x70လီတာ + 100မှ150လီတာ + 70လီတာ = 360လီတာ
မိသားစုဝငျငါးယောကျရှိပါက 5×70လီတာ + 100မှ150လီတာ + 70လီတာ = 570လီတာ စတဲ့တှကျနညျးအတိုငျးတှကျလို့ရပါတယျ ✔
ကိုယျထားခငျြတဲ့ရခေဲသတ်ေတာနရောကို တိုငျးတာပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ တိုငျးသညျ့အခါမှာ တံခါးဖှငျ့သညျ့အကယျြ၊ ဘေးထှကျသညျ့နရော၊ လဝေငျလထှေကျအတှကျ ဘေးနှဈဖကျကို (၅)စငျတီမီတာနဲ့ အပျေါနဲ့အနောကျဖကျခွမျးကို( ၁၀)စငျတီမီတာနရောလှတျထားပေးရမှာဖွဈပါတယျ ✔
အပူခြိနျ၊လနေဲ့စိုထိုငျးမှုတှကေ အစားအစာတာရှညျခံဖို့နဲ့ သနျ့ရှငျးလတျဆတျဖို့ အရေးကွီးဆုံးအခကျြတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာအတှငျး လလေုံတဲ့စနဈကိုဖှဲ့စညျးထားပေးခွငျးက အစိုဓာတျကိုထိနျးသိမျးပေးခွငျး၊ ရဓောတျခမျးခွောကျခွငျးကို ကာကှယျပေးခွငျးနဲ့ ရခေဲသတ်ေတာအတှငျး သိုလှောငျထားတဲ့အစားအသောကျတှကေို တာရှညျခံအောငျလုပျပေးခွငျးစတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြတှကေိုလုပျဆောငျပေးပါတယျ ✔
(၂) အခုတခါမှာတော့ ‌ရခေဲသတ်ေတာအသုံးပွုနသေူတှအေတှကျ ရခေဲသတ်ေတာကို လှယျလှယျကူကူသနျ့ရှငျးရေးလုပျနညျးအကွောငျးလေးတငျပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
မညျသညျ့ပစ်စညျးကိုမဆို စနဈတကအြသုံးပွုပေးသငျ့သလို ပုံမှနျသနျ့ရှငျး‌ရေးလညျးလုပျပေးမှသာ ပစ်စညျးရဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေ ကဆြငျးမသှားပဲ ကွာရှညျအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရခေဲသတ်ေတာကို ဘယျလိုသနျ့ရှငျးရေးလုပျရမလဲဆိုတာ လှယျကူရှငျးလငျးစှာပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျတော့မယျဆိုရငျ ပထမဦးဆုံးလုပျရမှာကတော့
1. အပွငျဖကျမကျြနှာပွငျကို စတငျသနျ့ရှငျးပါ
သနျ့ရှငျးနူးညံ့တဲ့အဝတျကိုယူပွီး ရခေဲသတ်ေတာအပွငျဖကျမကျြနှာပွငျကိုအရငျပှတျတိုကျသနျ့ရှငျးပေးပါ။ ရခေဲသတ်ေတာမကျြနှာပွငျမှာ ပှနျးရာခွဈရာတှထေငျနိုငျတာမို့ တိုကျတဲ့အခါမှာ နူးညံ့တဲ့အရာတှနေဲ့သာ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ဖယျရှားသနျ့ရှငျးဖို့သိပျမလှယျတဲ့ဖုနျအညဈအကွေးတှကေပျမိနပေါက ရမြေားမြားနဲ့ သို့မဟုတျ PHသနျ့စငျဆပျပွာရညျတှကေို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ရကျလှနျသှားတဲ့ အစားအသောကျတှနေဲ့ မစားသုံးသငျ့တော့တဲ့ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှကေို စိတျသနျ့သနျ့နဲ့သာ လှငျ့ပဈလိုကျပါ။ မလိုအပျတဲ့အရာတှကေို လှငျ့ပဈလိုကျတာက နောကျထပျ ဝယျလာတဲ့ ပစ်စညျးအသဈတှအေတှကျ နရောပိုရသှားနိုငျပါတယျ။
ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ယာယီသိမျးဆညျးထားခငျြတဲ့အစားအစာတှကေို အအေးဓာတျပေးထားလို့ရပါတယျ။ သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါမှာလညျး ပလပျဖွုတျထားပေးခွငျးဖွငျ့ စှမျးအငျကိုခြှတောနိုငျပါတယျ။
တံခါးလိုငျနာ၊ သဈသီးထညျ့တဲ့အံဆှဲတှနေဲ့ ကွကျဉတှတေငျတဲ့ စငျတှကေို သနျ့ရှငျး‌ရေးလုပျတဲ့အခါ
နူးညံ့တဲ့အဝတျကိုရေ‌နှေး(နှေးရုံလောကျသာ) ဖွငျ့ဆှတျပွီးအသုံးပွုပေးပါ။ ဖွုတျတပျလို့ရတဲ့ တံခါးဘောငျ၊ စငျ၊တနျးတှကေို လအေေးနဲ့အခွောကျခံပေးနိုငျပါတယျ။
ပစ်စညျးသကျတမျးပျေါမူတညျပွီး စီပေးပါ။ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှကေို ‌ရခေဲသတ်ေတာရဲ့ အနှေးဆုံးအပိုငျးဖွဈတဲ့ အတှငျးဖကျတံခါးဘောငျက စငျတှပေျေါမှာ ထညျ့ထားနိုငျပါတယျ။
(၃) ဒီနမှေ့ာတော့ အဝတျလြှျောစကျမြားကို ဘယျလိုသနျ့ရှငျးရေးလုပျရလညျးဆိုတာ ပွောပွပေးသှားပါမယျနျော
◾Auto Self Clean ပါဝငျသော Hitachi အဝတျလြှျောစကျမြား
Auto Self Clean ပါတဲ့ အဝတျလြှျောစကျလေးတှေ က အဝတျလြှျောနတေဲ့ အခြိနျအတှငျးမှာ ရပေိုကျမှကလြာတဲ့ရသေနျ့နဲ့ အဝတျလြှျောကနျရဲ့ အပွငျဘကျမှ အညဈအကွေးတှကေို အဝတျဆေး(Rinse) ပွီးတဲ့အခြိနျမှာ သနျ့ရှငျးပေးပါတယျရှငျ ။
ဒီခလုတျလေးကို ကနျသနျ့ရှငျးသှားအောငျ အဝတျလြှျောတဲ့အခါတိုငျးဖှငျ့ထားပေးရပါမယျနျော 💁
◾Auto Self Clean မပါသော Hitachi အဝတျလြှျောစကျမြား (သို့မဟုတျ) အခွားသောပုံမှနျ အဝတျလြှျောစကျမြား
Auto Self Clean မပါတဲ့ အဝတျလြှျောစကျတှမှောဆိုရငျတော့ Tab Clean function ကို အဝတျလြှျောကနျ သနျ့ရှငျးရေးအတှကျ2လကနေ3လကွားတဈခါ ကနျဆေးရညျလေးနဲ့ ပုံမှနျလေးအသုံးပွုပေးရပါတယျနျော ။
မှို ၊ ပိုးမှားတှေ ကငျးစငျသှားအောငျ 150 ကနေ 180 မိနဈအထိ (ပရိုဂရမျထညျ့သှငျးပွီးသား ) လညျပတျပေးရငျ ရပါပွီရှငျ 💁
ဒါဆိုရငျတော့ ဒီနပွေ့ောပွပေးသှားတဲ့ နညျးလေးအတိုငျး လုပျကွညျ့ရငျး ကိုယျ့အိမျမှာရှိတဲ့ အဝတျလြှျောစကျတှကေို cleaning လုပျကွမယျနျော 😄
မညျသညျ့Microwave ကိုမဆို လှယျလှယျကူကူပေါ့ပေါ့ပါးပါး သနျ့ရှငျးနညျးအကွောငျးလေးတငျပွပေးလိုကျပါတယျရှငျ့။ စားပွီးသား လိမ်မျောခှံတှကေ အမှိုကျပဈဖို့သကျသကျမဟုတျပဲ ဘယျလောကျအသုံးဝငျတယျဆိုတာသိပွီးကွပွီလားရှငျ့။ လူကွီးမငျးတို့အိမျတှမှော Microwave ကိုအသုံးပွုနပေါက ခုပွောပွမယျ့နညျးလမျးလေးတှကေအသုံးဝငျမှာအသအေခြာပါပဲနျော။
1. ပထမဦးဆုံး လိမ်မျောသီးလေးတှကေို အခှံခှာပါ။
2. ပွီးရငျ လိမ်မျောသီးခှံကို ‌‌ရအေနညျးငယျနဲ့အတူ မိုကျခရိုဝပေ့ျေါ ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးပါ။
4. လိမ်မျောသီးခှံတှကေိုဖယျရှားလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အဝတျသနျ့သနျ့နဲ့သုတျပေးပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ သနျ့ရှငျးတောကျပွောငျနတေဲ့ Microwave လေးဖွဈသှားပါပွီနျော။
အားလုံးပဲ ခုပွောပွပေးလိုကျတဲ့အခကျြတှအေတိုငျး နညျးစနာယူပွီးအသုံးပွုရတာအဆငျပွပေါစရှေငျ့။ဒါ့အပွငျ ကြှနျမတို့ Hitachi မှာလညျး Microwave တှကေို စြေးနှုနျးအသငျ့တငျ့နဲ့ ဝယျယူနိုငျပါ¬ကွောငျးသတငျးကောငျးပါးလိုကျပါတယျရှငျ။
မိတျဆှတေို့အတှကျ မလိုအပျပဲရမြေားကိုအသုံးပွုမိတာမြိုးမဖွဈရလအေောငျ မှတျရလှယျကူတဲ့ အခကျြလေး(5)ခကျြနဲ့ ပွောပွပေးသှားပါမယျနျော 👇
1. အဝတျလြှျောစကျကတဆငျ့ မလိုအပျပဲရမေဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးကွမယျ ✨
အဝတျလြှျောတဲ့ အခါမှာ အဝတျနညျးနညျးလေးပဲရှိတဲ့အခြိနျလြှျောတာထကျ အဝတျမြားတဲ့အခြိနျမှာတဈခါတညျးလြှျောတာက ရကေိုပိုပွီးခြှတောဖွဈတယျဆိုတာသိပွီးကွပွီလား ?
အဝတျလြှျောစကျနဲ့ အဝတျအထညျတှလြှေျောတဲ့အခါမှာ ထညျ့ရတဲ့ရပေမာဏက ကှာခွားမှုအမြားကွီးမရှိတာကွောငျ့ အဝတျအထညျနဲနဲလေးနဲ့ ရကေိုထပျခါထပျခါ ထညျ့ပွီးအသုံးပွုနတောထကျ အဝတျအထညျကိုမြားမြားစုထားပွီး လြှျောပေးရငျ မလိုလားအပျပဲရတှေကေို မသုံးမိတော့ တဈဖကျတဈလမျးကနလေညျးရကေိုခြှတောရာရောကျတာပေါ့နျော ။
2. အဝတျလြှျောစကျရှေးခယျြရငျးနဲ့လညျး မလိုအပျပဲရမေဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးကွမယျ ✨
အဝတျလြှျောစကျတှမှော အဝတျထညျ့တဲ့နရောလေးတှရှေိကွတယျနျော လှယျလှယျပွောရရငျတော့ အဝတျထညျ့တံခါးပေါကျလေးပေါ့နျော ။ အာ့လိုတံခါးပေါကျလေးတှကေ အဝတျလြှျောစကျရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာပါတဲ့စကျ(top loading washer)တှရှေိသလို အရှဘေ့ကျမကျြနှာစာမှာလညျးပါတဲ့စကျ(front loading washer)တှလေညျးရှိပါတယျ။
ဒီလို အမြိုးအစားနှဈခုမှာ နှဈခုလုံးကောငျးမှနျပမေယျ့ front loading washer လေးတှကေပိုပွီးရခြှေတောပေးနိုငျပါတယျနျော ။ အကွောငျးအရငျးလေးကတော့ American media website တဈခုဖွဈတဲ့ CNET မှ top loading စကျလေးက ရေ67L သုံးစှဲရပွီး front loading စကျလေးကတော့ရေ 32L သာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကို စမျးသပျပွသခဲ့လို့ပဲဖွဈပါတယျရှငျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ မလိုလားအပျပဲ ရအေသုံးမြားမှုကိုလြော့ခရြာမှာလညျး အဝတျလြှျောစကျကို ရှေးခယျြရငျးလြှော့ခနြိုငျပါတယျရှငျ ။
3. ကိုယျ့အိမျထဲမှာဖွဈပျေါနိုငျတဲ့ ရယေိုပေါကျတှကေို စဈဆေးရငျး မလိုအပျပဲ ရမေဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးကွမယျ ✨
အိမျတိုငျးအိမျတိုငျးမှာ ရစေကျလေးတှတေဈစကျတဈစကျနဲ့ ရယေိုနတေဲ့နရောတှေ ရစေိမျ့ထှကျနတေဲ့နရောတှရှေိနတေတျတာ သတိထားမိကွမှာပေါ့နျော ။ အာ့လိုရယေိုစိမျ့မှုတှကေအမြားအားဖွငျ့ ဘုံဘိုငျခေါငျးနဲ့သနျ့စငျခနျးတှမှောအဖွဈမြားတတျကွပါတယျ ။ အာ့လိုဖွဈလာတာနဲ့အမြှအိမျတဈအိမျမှာတဈနကေို့ 800L လောကျရဆေုံးရှုံးမှုတှဖွေဈပျေါနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မလိုလားအပျပဲရတှေကေိုမဖွုနျးတီးမိစဖေို့ ရယေိုပေါကျတှေ ရစေိမျ့ပေါကျတှကေို စဈဆေးရငျးခြှတောကွမယျနျော ။
4. အပငျလေးတှအေတှကျအသုံးပွုရငျး မလိုအပျပဲ ရမေဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးကွမယျ ✨
အိမျထောငျရှငျမလေးတှအေနနေဲ့ အသီးအနှံတှကေိုဆေးကွောတဲ့အခြိနျမှာ ဘစေငျ ဒါမှမဟုတျ ဇလုံ စတာမြိုးကို အသီးအနှံတှအေောကျမှာ ခံထားရငျး ရကေိုခြှတောနိုငျတယျဆိုတာသိပွီးကွပွီလား ?
လတျဆတျတဲ့အသီးအနှံတှကေို အသာအယာပှတျပွီး ဆေးကွောတဲ့ အခါမှာ တဈမိနဈကိုရေ 10L အထိအသုံးပွုနိုငျပါတယျ ။ ဒီနရောမှာဘယျလိုခြှတောနိုငျလဲဆိုတော့ ဆေးနတေဲ့အသီးတှကေိုဇလုံနဲ့ခံထားပွီး အသီးဆေးပွီးရရှိလာတဲ့ရတှေကေို ကိုယျ့အိမျမှာစိုကျထားတဲ့ အပငျလေးတှကေိုရလေောငျးပေးတဲ့ နရောမှာပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျပါတယျရှငျ ။ အသီးတှဆေေးရာမှာ ဇလုံနဲ့ရကေိုမခံထားဘူးဆိုရငျတော့ တဈမိနဈကို ရေ10Lဆုံးရှုံးစနေိုငျပါတယျ ။ အာ့လိုဇလုံလေးတှခေံပွီးရကေိုပွနျလညျအသုံးပွုပေးခွငျးက အပငျလေးတှအေတှကျလညျး ကောငျးမှနျသလို ရကေိုလညျးတဈဖကျတဈလမျးကနခြှေတောရာရောကျတာပေါ့နျော ။
5. ရခြှေတောနိုငျတဲ့အဆငျ့မွငျ့သတျမှတျခကျြတှပေါရှိတဲ့ အဝတျလြှျောစကျမြားကိုအသုံးပွုရငျး မလိုအပျပဲ ရမေဆုံးရှုံးအောငျထိနျးသိမျးကွမယျ ✨
အဆငျ့မွငျ့သတျမှတျခကျြ 3-ticks နဲ့ 4-ticks ရဲ့ကှာဟခကျြဟာဆိုရငျ အဝတျလြှျောစကျတှမှော အဝတျတဈခါလြှျောပွီးတိုငျး ပုံမှနျထကျရသေုံးစှဲမှု 3L ပိုမိုသကျသာတာကွောငျ့ မလိုအပျပဲရဆေုံးရှုံးနမှေုတှအေတှကျ ထိနျးသိမျးရာလညျးရောကျပါတယျရှငျ ။
ခုsharingလုပျပေးခဲ့တဲ့အတိုငျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ မလိုအပျပဲရကေိုမဆုံးရှုံးအောငျ လှယျလှယျကူကူထိနျးသိမျးနိုငျပါပွီနျော 😄
အောကျပါ link ထဲသို့ဝငျရောကျပွီး Hitachi Products မြားကို အသေးစိတျလလေ့ာနိုငျပါတယျရှငျ 👇🏻
Posted by Alex Aung at 5:12 PM No comments:
အသက် (၄၀)အရွယ်မတိုင်ခင် ရပ်တန့်သင့်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းအချို့ (Health Mistakes to Stop Before You’re 40)
‘ဘ၀ဆိုတာ အသက် လေးဆယ်မှစတာ’ သည်စကားကိုကြားဖူးနေကြဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်၊ လုပ်မိတယ် ဆိုတာ သတိပြု သတိမူမိချိန်မယ် အဆိုပါစကားလေးကို ဂရုထားသင့်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။
အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့ ကိုယ်ဟာ တစ်သက်တာလုံး လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ရှင်သန်သွားနိုင်မယ်လို့ ခံစားကြတာပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းလာပြီးနောက် အဆိုပါအမြင်ဟာ မစစ်မှန်ကြောင်း လက်တွေ့သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုခုလာရောက်မရိုက်ခတ်ခင်အခြေအနေမှာ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်ကို သေသေချာချာ သတိမူ မိဖို့တော့ ကောင်းတာလေ။ မသိသားဆိုးရွားစွာ ပြုကျင့်ဖြစ်သော အမူအကျင့်ဆိုးအချို့ရယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့အချက်တစ်ချို့ရယ်ဟာ ကိုယ်တွေကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀က လူလတ်ပိုင်းဘ၀ အဖြစ်စတင်ချိန်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘ၀နေထိုင်မှုဟန်ပန်တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်ခွင့်မပြုသင့်ဘူးပေါ့။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများသော အပြောင်းအလဲအချို့ကို အသက်အရွယ်ပိုပိုပြီး မအိုမင်းလာခင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ပြောပြပါရစေ။
(၁) အပြာရောင်အလင်း (Avoid Blue Lights)
၂၀၁၁ ခုနှစ် Harvard ရဲ့လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ TVs တွေ၊ Mobile Device တွေ၊ လက်နဲ့ကိုင်တွယ်ပြီးအသုံးပြုရတဲ့ Remote Control လိုပစ္စည်းတွေမှာသုံးတဲ့ blue lights လေးတွေဟာ ရောဂါအတော်များများရဲ့ အခြေအနေအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးပွားစေပါတယ်။
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို (Type2diabetes)၊
နှလုံးရောဂါ (Heart disease)၊
တစ်ချိန်လုံး တီဗီထိုင်ကြည့်နေတာမျိုး၊ ဂိမ်းကစားနေ စာဖတ်နေတာမျိုး အလုပ်တစ်ခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်နေတာမျိုးစတဲ့ လုပ်လက်စအလုပ် တွေကိုရပ်တန့်လို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ အိမ်မှုဗာဟီရအလုပ်အချို့ကို အချိန်တစ်နာရီကြာတိုင်း ဆယ်မိနစ်လောက်ထထလုပ်ဆောင်ပေးပါ။
(၂) အိပ်စက်ချိန်လုံလောက်ပါစေ (Not making sleepapriority)
ကိုယ်တွေကိုင်တွယ်နေကြ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေလိုပါပဲ ကိုယ်တွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦးဏှောက်ဟာ ပြန်လည်စတင်ဖို့ (reboot) ၊ ပြန်အားဖြည့်ဖို့ (recharge) လိုပါတယ်။ အသက် ၁၈နှစ်မှ ၆၄နှစ်အတွင်း အရွယ်ရောက်သူလူကြီးတွေဟာ တစ်ညကို အနည်းဆုံး ၇နာရီကနေ ၉နာရီထိ လုံလုံလောက်လောက်အိပ်စက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိမမှိတ် အိပ်ချိန်တွေကိုကျော်လွှားပစ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တွေကျန်းမာရေးကို အရေအတွက်တစ်ခုထိ ရိုက်ခတ်ချက်တွေရှိလာမှာပါ။ သွေးတိုး (hypertension) ပိုတက်လာခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း (stroke) နှင့် အ၀လွန်ခြင်း (obesity) တွေအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက် အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်နေနိုင်သလို အိပ်ချိန်နည်းပါးခြင်းဟာ ဇီဝကမ္မအရ အိုမင်းရင့်ရော်လာဖို့ ထောက်ကူအားပေးတဲ့ အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တာပါ။ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက်ပိုအိုသလိုဖြစ်နေခြင်း မျိုးပေါ့နော်။
သက်သောင့်သက်သာအိပ်စက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေ ကြိုးဖုန်းတွေ အိပ်ရာအနီးအနားမှာ တစ်လုံးမှ မထားဘူး၊ အလုပ်အကြောင်း စီးပွားရေးကိစ္စ လူမှုရေးရာတွေ အားလုံး မသက်ဆိုင်သလိုမျိုးထားလိုက်မယ်၊ အိပ်စက်မရ ဗိုက်ပြည့် အင့်နေအောင် ညစာမစားသောက်ထားဘူး စသည့်အချက်အလက်တွေ သေချာပြင်ဆင်ပြီးအိပ်စက်ရင် အနည်းဆုံး သက်သောင့် သက်သာဖြစ်တဲ့ အိပ်စက်ခြင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။
(၃) သွားသေချာတိုက်ပါ (Brush Your Teeth AND Floss)
လူအတော်များများသူတို့ရဲ့သွားတွေကို ဘရပ်ရ်ှနဲ့သွားတိုက်ကြပေမယ့် သွားကြားကိုသန့်စင်စေရန်အသုံးပြုတဲ့ ချည်ကြိုးနဲ့ သန့်စင်တဲ့ အဆင့်ကို ကျော်လွှားသွားတတ်ကြပါတယ်။ သွားအကျိုအကြားကိုသန့်ရှင်းစေတဲ့ အဲသည့်အဆင့်ကို ကိုယ်လုပ်နေကြ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ကိစ္စရပ်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ထားရပါမယ်။ စားကြွင်းစားကျန်တွေဟာ မာခဲလာပြီး ချိုး(ဂျိုး)ဖြစ်လာရင်း အင်္ဂတေလို အဆိုင် အခဲဖွဲ့သွားနိုင်လို့ပါ။ သွားဖုံးဆိုင်ရာရောဂါတွေကို များသောအားဖြင့်လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အသက်လေးဆယ်အစပိုင်းတွေမှာ စတင်ခံစား ကြရပါတယ်။ အချို့ကတော့ အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်ကတည်းက စတင်ခံစားနေကြရပါပြီ။ လေ့လာမှုများစွာအရ သွားဖုံးရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတို့ဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်ဆက်နွယ်နေတတ်ကြကြောင်း သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
(၄) အစားရှောင်ခြင်း (Stop Fasting)
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချနေချိန်မို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့အချိန် အလုပ်ကိစ္စများနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အစားအစာတွေကို ခပ်မြန်မြန်ပဲစားသောက်လိုကြ မစားဘဲနေကြတာမျိုးလုပ်ကြပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အစားအစာစားသောက်ချိန်ကျော်ပစ်တာမျိုး မစားတော့တာမျိုးတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာ သွယ်လျရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကူအညီမဖြစ်ပါဘူး။ သည်လိုလုပ်ခြင်းဖြင့် အစားအစာစားသောက်ချိန်မှာ ပိုမိုစားသောက်မိဖို့၊ အဟာရ မဖြစ်တဲ့ သွားရေစာတွေကို စားသောက်မိဖို့ ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့။ ထပ်ပေါင်းပြောရရင် အစားအစာမစား သောက်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှု (metabolism) ကိုနှေးကွေးသွားစေပြီးနောက် ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) ဖြစ်ဖို့ ဦးတည် သွားစေပါတယ်။ အနည်းဆုံး အသက် (၄၀)နှစ်နဲ့အထက် ၆၆%သော အရွယ်ရောက်လူကြီးတွေမှာ ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ အခြေအနေတွေက နည်းစပ်နေတယ်ဗျ။ ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အလွယ်လေးပါပဲ။ ရိုးရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နံနက်စာကို စားသောက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချရေးမှာ အကူအညီဖြစ်သလို ကိုယ်တွင်းစွမ်းအင်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုကို တိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။
(၅) ကျန်းမာရေးအချက်ပြမှုတွေကို လစ်လျူရှုခြင်း (Ignoring health warning signs)
ရှုံ့မဲ့ရသည်အထိ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတစ်ခုခုခံစားရသလား၊ လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလို မူးဝေမှုတစ်ခုခံစားရဘူးလား။ တစ်စုံတစ်ရာမှာ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာက သံလွန်စအဖြစ် အချက်ပြတာအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိရမှာပါ။ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေက ဘယ်ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ် ဘယ်လိုခံစားချက်ကဘာကြောင့်ဆိုသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခပ်စောစောအဖြေရှာနိုင်ခဲ့ ပါက ကုသမှုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သလို ဆင့်ပွားရောဂါတွေကြီးမလာအောင်လည်း တားနိုင်ပါတယ်။ Dr. Taber ပြောတာကတော့ ‘မပြောမဆိုနဲ့ သူတို့ရင်သားထဲအကြိတ်တစ်ခုတွေ့လို့ အံအားတသင့်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးအရေအတွက် အတော်များပါတယ်’တဲ့။ ‘သူတို့ပြသတိုင်ပင်မယ့်သူဟာ ယုံကြည်လို့ရမယ့်သူလို့ သိရှိချင်ကြသေးတာ’ဆိုပဲ။ လူနာအများအပြားဟာ ကြောက်လန့်စိတ်၊ ရှက်ရွံ့စိတ်၊ သို့မဟုတ် သူတို့ထင်မြင်ချက်မှားယွင်းနေတယ်လို့ တွေးတတ်ကြတယ်လို့ ဒေါက်တာကပြောပါသေးတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြသမှုမပြုလုပ်ခင် မေးမြန်းတိုင်ပင်ချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာရေးခြစ် စာရင်းတို့ထားပါ။
(၆) စီးကရက်လေးတစ်ဖွာ နှစ်ဖွာ [Sneakingacigarette (or two)]
တစ်ဖွာရှူရှိုက်မိရင် စွဲလမ်းသေးဆိုတဲ့ စာသားပါ မူးယစ်ဆေးပညာပေးတေးသီချင်းကိုကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံးကိုမှ စီးကရက် တစ်လိပ်သောက်တာပါတို့ တစ်ဖွာနှစ်ဖွာရယ်ပါတို့ ဆင်ခြေလက်ခြေပေးကြပေမယ့် တစ်ခါတရံ တကယ့်ကိုမှ တစ်ဖွာလေးပဲ ဆိုသူမှလွဲလို့ စီးကရက်၊ဆေးလိပ်တစ်မျိုးမျိုးကို သောက်သုံးတတ်သူဖြစ်ပါက ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်မယ့်နှုန်း၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် မသိသားဆိုးရွားသော အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေဖြစ်ပွားခြင်းအမှု မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အသက် လေးဆယ်မတိုင်ခင်အထိ စီးကရက်၊ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း ဆက်နွယ်ပတ်သက်ခြင်းမကင်းဆိုပါလျှင် အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးဖို့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတာသိထားရပါမည်။ တကယ်လို့ အသက်အရွယ် လေးဆယ်ကျော်လို့ ငါးဆယ်နှစ် အစောပိုင်းမှာပဲ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါလျှင် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်လျော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာ မပျက်စီးမယိုယွင်းအောင် မိမိကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းလို့ရသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
“ဆေးလိပ်ကင်းမဲ့ရေးဇုံ”သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပန်းဖြေနေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရက ကြပ်မတ်ဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆေးဖြတ်စခန်းတွေကို သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နီကိုတင်းနဲ့ဝေးရာနေရာမှာ ခဏတာရှောင်နေလိုက်ပါ။
(၇) အငန်ဓာတ်စားလွန်းခြင်း (Eating too much sodium)
ဆိုဒီယမ်ဆိုတဲ့ ဆားမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ဓာတ်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချသူများ စားသောက်သုံးစွဲနေတဲ့ အစားအသောက်ပစ္စည်း အချို့မှာပါ မသိမသာပါဝင်နေတတ်တာကို သတိမူရပါမယ်။ ပေါင်မုန့်တွေ၊ အသင့်ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ အသားလွှာတွေ၊ အသားတွေ၊ စွပ်ပြုတ်၊ ဒိန်ခဲ၊ ဆော့စ်နဲ့ အသုပ်လုပ်ရာမှာထည့်တဲ့ စားမြိန်ရည်တွေ၊ ပြီးတော့ အခြားသော အတွဲအစပ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာ ဆိုဒီယမ်က ပါဝင်နေပါတယ်။ လူအများစုဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆိုဒီယမ်ပမာဏထက်ပိုပြီး စားသောက်သုံးစွဲနေကြတာပါ။ နေ့တစ်နေ့ အတွက် အမြင့်ဆုံးစားသုံးနိုင်တဲ့ ပမာဏသည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်လောက်သာလို့ ထောက်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ လိုအပ်သည် ထက်ပိုမိုသုံးစွဲပါက သွေးဖိအားတိုးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးရောဂါရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဗျ။
ကိုယ်စားသောက်မယ့်အစားအသောက်ရဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်က အညွှန်းစာသားတွေကို အရင်ဆုံး ဂရုတစိုက်သေချာဖတ်ရှုကာ တစ်ရက်တာအတွက်ဆိုလျှင် ၂၃၀၀ မီလီဂရမ်အောက် (ကိုယ့်မှာ သွေးဖိအားများတတ်တဲ့ အခြေအနေရှိပါက ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်) ရောက်နေဖို့တွက်ချက်ပြီး ပြင်ဆင်စားသုံးရပါမယ်။
(၈) ရေသိပ်မသောက်ခြင်း (Being dehydrated all the time)
ရေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့ အရေပြားအပါအ၀င် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနဲ့ ဆဲလ်တိုင်း (cells)ကို အားအင်ဖြစ်စေ အဟာရအဖြစ် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်တွေအသက်အရွယ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ပိုမိုပြည့်ဝနေဖို့ဆိုတာ အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက် တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အရွယ်ရောက်လူကြီးတွေဟာ သူတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အလုပ်အချို့ကြောင့် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးဖို့ အမြဲအခွင့်အလမ်းရှိနေလို့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလိုလိုက်လို့ မောနင်းပက် တစ်ခွက် ဒါမှမဟုတ် ရေဆာတာကိုမသိဘဲ အချိုရည်တွေ သောက်သုံးခြင်းတို့ဟာ ရေဓာတ်လုံလုံလောက်လောက် မရစေနိုင်ပါဘူး။ ရေဆာခြင်းကို ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ကော်ဖီတို့ သကြားမပါဖျော်ရည်တို့ သောက်မိတာကိုလျော့ပါးစေမှာပါ။
ဆီးသွားချိန်မှာ ဆီးအရောင်ဟာ အ၀ါရင့်ရောင်ဖြစ်နေပါလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း H2O သွင်းဖို့ အချက်ပြနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတိမူရပါမယ်။
(၉) နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ခြင်း (Avoiding dairy products)
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချဖို့ ကယ်လိုရီတွက်ချက်စားသောက်နေကြသော အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် လေပူထတာမျိုးနဲ့ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်နေတတ်သူအများစုဟာ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အရိုးပဒေသာဖြစ်နေခြင်း မဖြစ်ခြင်း သိပ်ဂရုမပြုတတ်ကြပါဘူး။ Lisa Larkin (MD, director of the University of Cincinnati Women's Health Center) ပြောတာက တော့ ‘အသက်အရွယ် ၂၀နှစ်နဲ့ ၃၀နှစ်တွေမှာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်များများမှီဝဲဖို့ တကယ် တကယ့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အသက်အရွယ် သုံးဆယ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အရိုးသိပ်သည်းဆတဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာတတ်လို့ပါပဲ။’
‘အမျိုးစုံသော အစားအသောက်တွေကတစ်ဆင့် တစ်ရက်ကို ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် (1000 mg) လောက် စားသောက်/ ရရှိခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါက ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ဖြည့်စွက်ဖို့ calcium supplement တစ်ခုခုမှီဝဲရပါမယ်’ လို့ Dr. Larkin က အကြံဉာဏ်ပေး ပါတယ်။
(၁၀) ဆရာဝန်များကို လိမ်ညာခြင်း (Lying to your doctor)
လူနာတွေက လိမ်ညာသလို ဆရာဝန်တွေကလည်း သိနေပါတယ်။ လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပြောကြားတာက လူနာလေးယောက်မှာ အနည်းဆုံးတစ်ယောက်လောက်ကတော့ သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက် လို့ အကြောင်းအရာအချို့ကိုထိန်ချန်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်ထားခြင်းမျိုး ၊ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ တစ်ဝက်လောက် သို့မဟုတ် အပြည့်အ၀ အမှန်လို့ယုံကြည်ရနိုင်ပါသတဲ့။ ကိုယ်တွေအရွယ်မှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်အချို့ကို ပြဿနာတစ်ခုအသွင်ရင်ဆိုင်ရစ အချိန်မယ် မုသားဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းငယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိမ်လည်ဖြေကြားလိုက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်တစ်ခု ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
မိမိခံစားနေရသော ရောဂါအခြေအနေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကောင်းမွန်ဆုံးပြောကြား သို့မဟုတ် ဖြေကြားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ‘သမားတော်များဟာ သူတို့သိလိုက်ရတဲ့အခြေအနေ၊အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မူတည်၍သာ အကောင်းဆုံးညွှန်ကြားကုသနိုင်ကြတယ်’ လို့ Dr. Larkin ကပြောပါတယ် ခင်ဗျ။
(၁၁) ကိုယ်အလေးချိန်ကို သတိမမူခြင်း (Skipping the weight room)
ကောင်းမွန်ပြည့်စုံလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်စဉ် အစီအစဉ်တွေမှာ strength training မပါလျင်မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလို့ရ ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်စဉ်ဟာ ကြွက်သားတွေကို ကျစ်လစ်တောင့်တင်းစေတယ်၊ ကိုယ်တွင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေး တယ် (boost metabolism) ၊ အရိုးတွေကို ခိုင်မာကျစ်လစ်စေတယ်လေ။ လေ့လာချက်များအရ အဆိုပါလေ့ကျင့်စဉ်ဟာ သက်သောင့် သက်သာ လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနိုင်မှု (flexibility) ၊ ဟန်ချက်ညီမှု (balance) နဲ့ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏ လည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သည်လို ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာ ကိုယ်တွေလို အသက် ၄၀ ၀န်းကျင် တွေအတွက် အတော်အရေးပါပါတယ်။ အသက် ၅၀နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ အမျိုးသမီးများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်မှာ တင်းပါးဆုံ၊ ခါး သို့မဟုတ် ကျောရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာကျင်တာ ကျိုးပဲ့တာမျိုးတွေ သူတို့ဘ၀သက်တမ်းတလျောက် ခံစားဖူးကြတယ်ပြောတယ်။ သို့သော်လည်း အရိုးတွေကို ကျစ်လစ်စေ သန်မာစေတဲ့ strength exercises တွေဟာ အရိုးကျွတ်ဆတ်တဲ့ရောဂါ (brittle-bone disease) ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Gym ကိုမသွား အိမ်မှာတင်လုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့ ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ အဆင်သင့်အလေးတွေတပ်ဆင်ပြီးသား weight machines တွေ၊ မျော့ကြိုးတွေ (elastic bands) သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်အလေးချိန်ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်ရတဲ့ resistance training (အဲ….ဒိုက်ထိုးတာတို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတို့လိုမျိုး)များကို ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အစီအစဉ်ထဲမှာ အသေအချာ ထည့်သွင်းဖော်ဆောင်လို့ရနေတာ ဂရုပြုကြရပါမယ်။
(၁၂) လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်ခြင်း (Not having sex)
အသက် ၃၀နှစ်များမယ် ကိုယ်တွေရဲ့ ကလေးငယ်များနဲ့ များမြောင်လှသော အလုပ်ကိစ္စများရဲ့ ခြေချုပ်ထားမှုကြောင့် လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ ကို ဘေးတွန်းပို့ခြင်းခံထားရပါတယ်။ ကလေးတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းအသက်ပိုကြီးလာ အလုပ်တွေလည်းအတော်အသင့်ချောင်လည် လာမယ့် အသက်ကာလအပိုင်းအခြားမှာတော့ လိင်မှုကိစ္စအား အလျင်စလိုလုပ်ဆောင်ရမယ့်စာရင်းထဲ ပြန်လည်ထည့်သွင်းသင့်တယ်လို့ Dr. Taber ကဆိုပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ထဲ ၀င်ရောက်စပြုတဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားမယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖွယ် လိင်မှုဘ၀တစ်ခုကို သေချာထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည် ရင်းနှီးနွေးထွေးတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရဲ့ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ် ခင်ဗျ။ ‘တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် လစ်လျူရှုလိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖွယ်လိင်မှုဘ၀တစ်ခု ပြည်လည်ခိုင်ခံ့ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်’ လို့ သူမကဆိုပါတယ်။
‘လိင်ဆက်ဆံရာမှာ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားရလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြောဆိုတိုင်ပင်ရပါမယ်။ ဆေးဝါးကုသမှုတွေပြုလုပ်လို့ လဲရနိုင်ပါပြီ’လို့ Dr. Larkin က ထပ်လောင်းပြောကြားသေးတာပါ။ စာတွေဖတ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ’10 ways to deal with painful sex’ လို ခေါင်းစဉ်တွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေလို့လည်းရတယ်နော်။
(၁၃) နေပူဆာလှုံခြင်း (Sunbathing)
အခင်းလေးခင်းလို့ နေရောင်ကျတဲ့နေရာမှာ လှဲလျောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နေရောင်ပြင်းထန်တဲ့ အရိပ်မရှိနေရာမှာ တနေကုန် အလုပ်လုပ် ခြင်းသည့် Ultraviolet ရောင်ခြည်သင့်ကာ အသက်မကြီးရင့်သေးသော အရေးပြားသော်မှ ပျက်စီးစေနိုင်သလို အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများစေပါတယ်။ တင်းတိပ်ကျခြင်းနဲ့ အနာရောဂါဖြစ်ခြင်းရဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ တိုးမြင့်လာခြင်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နေရောင်ကာလိမ်းဆေး (sunscreen)သုံးတာရယ်၊ အမှန်တကယ် ဖုန်းကာပေးနိုင်တဲ့ အ၀တ်အစားများဝတ်ဆင်တာရယ် က အထောက်အကူဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ ‘အတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေကြောင့် ပျက်စီးခဲ့တာကို ဖျက်ပစ်လို့မရပေမယ့် နောင်မှာမဖြစ်ပျက် ဖို့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်၊ ဥပမာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပစ်တာမျိုးပေါ့’ လို့ နယူးယောက်မြို့က အရေးပြားဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး Ronal Brancaccio မှပြောထားတာရှိပါရဲ့။
နေလောင်ခံအသားအရေ သို့မဟုတ် ကြေးနီရောင်အသားအရောင်မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင် နေလောင်မခံပါနဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ လှည့်စားနိုင်ပါကြောင်းပြောပါရစေ။
(၁၄) အချိုရည်လေးတွေ တစ်ကျိုက်နှစ်ကျိုက်(Sipping sweet drinks)
ဆိုဒါအချိုရည်တွေနဲ့ အခြားသော သကြားကဲ သောက်စရာတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ဖို့ နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဆိုတာ ကိုယ်တွေသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သကြားမပါ အချိုမပါတဲ့ အချိုရည်(soft drinks)တွေကို ဖန်တီးထားတဲ့ အချိုတုတွေလိုပဲ ဆင်ခြင်သင့် တဲ့စာရင်းထဲတို့ထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးလေ့လာချက်များအရ diet soda သောက်ခြင်းသည်လည်း ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း၊ အင်ဆူလင်ဓာတ်အပေါ်တုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်း (insulin resistance) နဲ့ ဆီးချိုသွေးချို (diabetes) ရောဂါများနှင့် နှီးနွယ်နေတတ်ပါသတဲ့။ Tuffs University ရဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ diet ပဲဖြစ်ဖြစ် regular cola ပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲသောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုး သိပ်သည်းကျစ်လစ်မှု လျော့ပါးနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ Johnson City ရှိ Nutrition-In-Sight ပိုင်ရှင် Monique Richard အပြောက ‘ခင်ဗျား ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းက အဟာရဓာတ်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်သလိုဖြစ်နေတာပဲ’တဲ့ ခင်ဗျ။
အချိုရည်ဆိုတာထက် သကြားကိုမရှောင်နိုင်လျင် သဘာဝသစ်သီးတွေကရတတ်တဲ့ အချိုမျိုးကိုသာနှစ်သက်သင့်သလို ဆိုဒါအချိုရည် သောက်မှဆိုပါက diet soda မျိုးရွေးချယ်ပြီး တတ်နိုင်ရင်တော့ သန့်စင်တဲ့ရေကိုသောက်သုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့။
(၁၅) အရန်သင့်အစားအစားတွေ အများအပြားစားသောက်ခြင်း (Eating too much processed food)
Gym မသွားခင် အာလူးကြော်လေးတစ်ထုတ်လောက်ဆွဲပြီးစားတာက ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အကောင်းဆုံးသော အဟာရ… အဲ … လောင်စာကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ processed foods တွေမှာ အရသာပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်မှုရဲ့ လျို့ဝှက် ချက်က သကြား၊ အဆီနဲ့ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တွေကို အချိန်အတော်များများမှာ ထပ်ပေါင်းအသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်အရာတွေက ကိုယ်တွေရဲ့ ခါးကိုပိုတုတ်စေသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အရေအတွက်တစ်ခုထိ သက်ရောက်တယ်ပေါ့။ သည်လိုအစားအစာ တွေအစား microwave meals လို့ပြောနိုင်တဲ့ အသားငါး၊ သွားရေစာနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်ပြုတ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အသား(အသားလွှာတွေ၊ အမွှေးနှုတ်ထားတဲ့ ကြက်ကောင်လုံးတွေ)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အစားထိုးသင့်ပါ တယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ တိုက်ခန်းကနေဆင်းပြီး လက်တစ်ကမ်းမှာသွားဝယ်လို့ရတဲ့ ရပ်ကွက်ဈေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားလေးမောင်းပြီး ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်လောက်နဲ့ ရောက်မယ့်ဈေးပဲဖြစ်ဖြစ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သွားဝယ်ကာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်စားလိုက်တာက ကျန်းမာရေး အတွက် ပိုကောင်း ကြောင်း Richard ကပြောပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမယ် မီးဖိုချောင်ဝယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် အစားအစာ အမျိုးနှစ်ဆယ်လောက်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထုပ်ပိုးကာ ထည့်ထား သင့်ပါတယ် ခင်ဗျ။
(၁၆) အရက်သေစာ သောက်စားပျော်ပါး (Bingeing on alcohol)
ကိုယ်တွေအများစုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ကိုဟော ပမာဏခပ်များများလေး သောက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေတာပါတဲ့။ ‘ရေဓာတ်ကုန်ခန်းခြင်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ နဂိုအခြေပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ အသက်အရွယ်ရလာပါက ထင်သလောက်မမြန်ဆန်တော့ပါဘူး။’ လို့ Richard ကပြောပါတယ်။ လျော့သောက်ခြင်းက သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဆိုပါလျှင် တစ်နေ့တစ်ခွက်ထက်ပိုမသောက် သင့်သလို အမျိုးသားဖြစ်ပါက တစ်နေ့ နှစ်ခွက်ထက်ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။
တစ်ခွက်ဆိုရာမှာ ၅ အောင်စ ၀ိုင်တစ်ခွက်၊ ၁၂ အောင်စ ဘီယာတစ်ခွက်၊ သို့မဟုတ် ၁.၅ အောင်စ ၀ီစကီတစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်။
(၁၇) သူငယ်ချင်းကိစ္စနဲ့ပဲ အချိန်ကုန် ("Friending" instead of socializing)
ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့ Facebook နဲ့ Twitter တို့လိုလူမှုကွန်ရက်တွေကတစ်ဆင့် ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုဖြစ်နေသလား ဆန်းစစ်ပါ။ ‘မိမိရဲ့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရေးအတွက် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ နေထိုင်အသက် ရှင်ဖို့ဆိုတာ အလွန်အရေးပါပါတယ်၊ သည်အချက်ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ရိုက်ခတ်မှုရှိပါတယ်’ လို့ Provino ကပြောပါတယ်။ အလုပ်မအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တည်းနေကျင့်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ့်လူမှုအ၀န်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေထိုင်အသက် မရှင်ဘဲ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ အချိန်မကုန်သင့်တာကို အဓိကပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေသုံးတာကို ခဏရပ်တန့်လိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေရယ် အပြင်ထွက်ကာ မုန့်သွားစားတာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာပြုလုပ်ပါ။ ဒီဂျစ်တယ် detox တွေကနေ ခဏတာကင်းလွတ်ခွင့်ရယူသင့်တာပေါ့ဗျာ။
(၁၈) မိသားစုကျန်းမာရေးရာဇ၀င်ကို မြေလှန်ခြင်း (Failing to discuss family health history)
အထက်ပါအကြောင်းအရာကို သဘောကျ သို့မဟုတ် သဘောမကျဆိုသော်ငြား ကိုယ်တွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဟာ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်တဲ့အဓိကအချက်ထဲမှာပါကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်တွေအသက်အရွယ်ဟာ သုံးဆယ်ဝန်း ကျင်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပါလျှင် ရင်သားကင်ဆာ သို့မဟုတ် သားဥအိမ်ကင်ဆာမျိုး ကိုယ်တွေမိသားစုကျန်းမာရေးရာဇ၀င်မှာ ရှိခဲ့ကြောင်း သမားတော်အနေနဲ့ သတိပြုမိဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။သူမအနေနဲ့ ကိုယ်တွေအရွယ်မှာ သည်ရောဂါတွေရဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာကိုပါ ထည့်သွင်းဆန်းစစ်ဖို့ အာရုံမစိုက်မိခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုး။ သိရှိမှသာ ခပ်စောစောလေးကုသပျောက်ကင်းနိုင်တယ်မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် မိမိ မိသားစုရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇ၀င်ကို သေချာလေ့လာသင့်ပြီး သည်အကြောင်းခြင်းရာတွေကို ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ မှာထည့်သွင်းပြောပြဖို့ အရေးပါတာ သတိပြုပါ။
(၁၉) ကုသဖို့ထက် ကာကွယ်ဖို့ကို အာရုံမကပ်ခြင်း (Not making time for preventive care)
အသက်သုံးဆယ်အရွယ် အမျိုးသမီးအတော်များများဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂရုစိုက်ဖို့အချိန်သိပ်မယူမိကြတာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လဲ အချို့သောကိစ္စရပ်တွေမှာ အရှုံးပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမယ် ကိုယ်လက်စထရောဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာမျိုး မလုပ်ကြတော့ အသက်အရွယ် ၄၀နှစ်နဲ့ ၅၀နှစ်တွေမှာ နှလုံးရောဂါခံစားရစေဖို့ မိမိဘာသာအထိုင်ချနေဟန် မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ ကဲ ရင်သားမယ် အကျိတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးတာမျိုး၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှိမရှိ ဆေးစစ်တာမျိုး၊ အခြားသော ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေ ခပ်စောစောပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ကင်ဆာရောဂါလိုမျိုးအတွက် ခပ်စောစောအဆင့်မှာတင် ကုသဖို့လွယ်ကူသွားနိုင် တာပေါ့ဗျာ။
အရွယ်ရောက် လူလတ်ပိုင်းတွေအတွက်က ကာကွယ်ထားခြင်းသည် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာအသက်အရွယ်ကြီးဖို့ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်အဖြစ် အထောက်အကူကောင်းပေးပါတယ်။
(၂၀) ကာကွယ်ဆေးများ မထိုးနှံခြင်း (Skipping recommended vaccines)
ကလေးသူငယ်တွေသာ ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ကာကွယ်သင့်သောရောဂါများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူကြီးတွေအတွက်လည်း ထိုးနှံသင့်သောကာကွယ်ဆေးတွေရှိကြပါတယ်။ အသက်ငယ်စဉ်ကတော့ တုတ်ကွေးကာကွယ်၊ ရေကျောက် ကာကွယ်၊ ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေး စသဖြင့်ထိုးကြတယ်မဟုတ်လား။ အသက်အရွယ်ရလူကြီးများအဖို့တော့ မိမိတို့အသက်ရှင်လုပ်ကိုင် နေရတဲ့ ဘ၀ဟန်ပန် လုပ်ငန်းခွင်အလိုက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရတဲ့အမျိုးအစားတော့ အနည်းငယ်ကွာတာပေါ့။ အရွယ်ရောက်သူ ၅သောင်း လောက်ဟာ ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ရောဂါများကြောင့် နှစ်စဉ်သေဆုံးနေကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တွေလည်း ဖျားနာခြင်းအန္တရာယ်နဲ့ အခြားသောရောဂါအန္တရာယ်တွေ မကူးစက်ခံ၊ မဖြစ်ပွားရစေဖို့ လျော့ချဖို့ ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားကြပါစို့လို့။
Alex Aung (20 April 2020)
ယခုလို နွေရာသီတွင် အပူချိန်ပြင်းထန်ခြင်းကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ ပြင်ပအပူချိန် လွန်ကဲခြင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်သည်ကို လူတိုင်းသတိပြု သင့်သည်။
လူ၏ခန္ဓာကိုယ် ကလာပ်စည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ကောင်းမွန် သော ဇီဝကမ္မအခြေအနေ (Optimal Physiological Status)ရှိဖို့လိုသည်။ လုံလောက်သော အရည်နှင့် ဓာတ် ဆားမျှခြေ (Fluid and Electrolyte Balance)၊ အချဉ် အခါးမျှခြေ (Acid Base Balance)စသည့် အခြေအနေများ လိုအပ်သည့်အပြင် သင့်တင့်မျှတသော အပူချိန် (Optimal Temperature)ရှိဖို့လည်း အရေးကြီးသည်။
လူ၏ဦးနှောက်ရှိ ဟိုက်ပိုသားလမတ်စ် (Hypothalmus) တွင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်သောဗဟို ဌာန (Thermoregulation Center) ရှိသည်။ ထိုနေရာ တွင် အပူချိန်ကိုအာရုံခံနိုင်သော နာ့ဆဲလ်များ (Thermo – sensitive neurons) ရှိ၍ လိုအပ်သောအချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားရှိ ချွေးဂလင်းများ (Sweat Glands) ကို ချွေးထွက်စေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ထို့ပြင် အရေပြားရှိ အပူချိန်လက်ခံ နာ့ဆဲလ်များ (Thermoreceptor neurons)များမှ သတင်းပို့ချက်များကိုလည်း အပူချိန်းထိန်းချုပ် ဗဟိုဌာနက လက်ခံသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အပူလွန်ကဲလျှင် အပူဆုံးရှုံးစေသောစနစ် (Heat Loss Mechanism)ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူလျော့စေ၍အအေး လွန်ကဲလျှင် အပူရရှိစေသောစနစ် (Heat Gain Mechanism) ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်နွေးထွေးလာ စေသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်ကို ၉၇ ဒသမ ၅ နှင့် ၉၉ ဒသမ ၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ထိန်းထားသည်။
ပြင်ပအပူချိန် (Environmental Temperature) မြင့်တက်လာသောအခါ အရေပြား အာရုံခံနာ့ဆဲလ်များမှ ဦးနှောက်ဗဟိုဌာနသို့ သတင်းပို့သဖြင့် အရေပြားအောက်ရှိသွေးကြောများ ကျယ်လာပြီး ချွေးထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ထွက်လာသောချွေးများ အငွေ့ပျံခြင်း(Evaporation)ဖြင့် အရေပြားအပူချိန်ကို လျော့စေသည်။ အရေပြားရှိ သွေးပြန်ကြောများမှ နှလုံးသို့ရောက်ရှိပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ကိုယ်တွင်းအပူချိန် (Core Temperature) ကျလာသည်။ ချွေးထွက်ခြင်းသည် ပူသောအချိန် ကိုယ်အပူချိန်ကိုကျစေသော အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်အပူချိန်ကို လျော့စေသော အခြားနည်းများမှာ အပူဖြာထွက်ခြင်း(Radiation)၊ အပူစီးထွက်ခြင်း (Convection)၊ အပူကူးပြောင်းခြင်း (Conduction) တို့ဖြင့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကျစေနိုင်သည်။
အပူဖြာထွက်ခြင်းဖြစ်ရန်မှာ လက်ရှိခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ထက်နည်းသောနေရာ(ဥပမာ-အရိပ်ထဲ)တွင် ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူများဖြာထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပူစီးထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အရေပြားအပေါ် ကပ်လျက် လေလွှာ သို့မဟုတ် ရေလွှာဖြတ်သန်းသွားသောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာမှ အပူများကိုသယ်ဆောင်သွားခြင်းဖြင့် အပူလျော့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အပူကူးပြောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အေးသောလေ သို့မဟုတ် ရေနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သဖြင့် အပူများ ကူးပြောင်း၍ ကိုယ်ခန္ဓာအပူလျော့ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးသောရေနှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် လေအေးနှင့် ထိတွေ့ခြင်း ထက် ၂၅ ဆ ပို၍မြန်မြန်အေးသည်။
အပူလွန်ကဲမှုများကို ခန္ဓာကိုယ်က အထက်ပါနည်းလေးနည်းဖြင့်ထိန်းညှိ၍ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပေသည်။ သို့သော်ပြင်ပ အပူချိန် အလွန်အမင်းမြင့်တက်သောအခါတွင် လည်း ကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ အပူထိန်းသိမ်းသည့်စနစ် အားနည်းသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ (၁) အပူလွန် ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း (Heat Exhaustion) နှင့် (၂) အပူလေဖြတ်ခြင်း (Heat Stroke) တို့ဖြစ်ပါသည်။
Heat Exhaustion တွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ နေမကောင်းဟုခံစားရခြင်း၊ ချွေးအဆမတန်ထွက်ခြင်း၊ အရေပြားဖျော့တော့ စေးထိုင်းအေးစက်နေခြင်း၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်နှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင်ကြွက်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်းနှင့် သွေးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန် ၃၈ ဒီဂရီစင်ဒီဂရိတ် သို့မဟုတ် ယင်းနှင့် အထက်တွင်ရှိ ခြင်း၊ ရေအလွန်အမင်းငတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထိုလက္ခဏာ များသည် လူကြီးနှင့်ကလေးတွင် တူလေ့ရှိသော်လည်း ကလေးများတွင် အရုပ်ကြိုးပြတ်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပြီး အိပ်ငိုက်နေမည်။ အထက်ပါလက္ခဏာများ ပေါ်လာလျှင် ခန္ဓာ ကိုယ်ကို အမြန်ဆုံးအေးအောင်လုပ်ဖို့ လိုပါသည်။
(၃) ရေများများသောက်ပါ။ အခြားရေဖြည့်ပေးသော ဖျော်ရည်များလည်းရပါသည်။
(၄)အရေပြားကိုအေးအောင်လုပ်ပါ၊ ရေအေးဖြင့် ဖျန်းခြင်း၊ ရေပတ်တိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ပန်ကာလေခံပါ၊ ချိုင်းကြားနှင့် လည်ပင်းတွင် ရေပတ်တိုက်ခြင်းများလည်း အကျိုးရှိပါသည်။ အထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်လျှင် မိနစ် ၃၀ အတွင်းပြန်ကောင်းလေ့ရှိပါသည်။
အကယ်၍မိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာသော်လည်း မသက်သာလျှင်၊ ကိုယ်ပူပြီး ခြောက်သွေ့နေလျှင် ကိုယ်ပူသော်လည်း ချွေးမထွက်လျှင်၊ ကိုယ်အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်(၁၀၄ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်)နှင့် အထက်ဖြစ်လျှင်၊ အရေပြားနီရဲခြောက်သွေ့၍ ပူနေလျှင်၊ အသက်ရှူတို၍ မြန်နေလျှင်၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်လာလျှင် ဝက်ရူးပြန် သကဲ့သို့တက်လျှင်၊ သတိလစ်မေ့မြောသွားလျှင် အပူလေဖြတ်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သဖြင့် အလွန်စိုးရိမ်ရပါ သည်။ ဆေးအကူအညီ အမြန်ဆုံးရယူခြင်း (ဥပမာဆေးရုံကား ဖုန်းဆက်ခေါ်ခြင်း၊ တောရွာဖြစ်လျှင် ဆေး ဝန်ထမ်း၊ ကျန်းမာရေးဆရာမ၊ သူနာပြု၊ ဆရာဝန်ပင့်ခြင်း၊ ခေါ်ခြင်း)ဆောင်ရွက်၍ ဆေးရုံတင်ရပါမည်။
(၁) လေအေးပေးစက်၊ ပန်ကာစသည်မရှိသော၊ လေဝင်လေထွက်မကောင်းသော၊ လေကောင်း လေသန့် မရသော အခန်းများတွင်နေရသူများ၊
(၂) ရေလုံလောက်စွာ မသောက်ရသောသူများ၊ နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၊ အရက်အလွန် အကျွံသောက်သူများ။
(၃) အပူညွှန်းကိန်း(Heat Index)မြင့်သောနေရာ တွင် နေသူများ။
အပူညွှန်းကိန်းဆိုသည်မှာ ခံစားရသော အပူချိန် နှင့် စိုထိုင်းဆကို အချိုးချတိုင်းတာသော တန်ဖိုး တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူညွှန်းကိန်း ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်ရှိသော နေရာများတွင် ချွေးငုပ်စေသဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာက ကိုယ့်ဘာသာ အေးအောင် မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ အပူညွှန်းကိန်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဆိုလျှင် (အထူးသဖြင့် အပူလှိုင်းဖြတ်သောအခါ) အပူကြောင့်ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှု(Heat – Related illness)ဖြစ်ပွားနှုန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အပူညွှန်းကိန်းကို မိုးလေ၀သဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်၍ အများပြည်သူ သိရှိအောင် ရေဒီယို၊ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ ကြေညာပေးသင့်ပါသည်။
မြို့ပြတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် လေထုစုပုံငြိမ်သက်မှု (Stagnant atmorspheric condition)ကြောင့် အပူစုဝေးမှုအကျိုး (Heat Island Effect) ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ခြင်းသည် အပူလွန်ရောဂါများကိုဖြစ်စေသည်။ နေ့ဘက်တွင် ကွန်ကရစ်နှင့်အုတ်များသည် အပူကို စုပ်ယူထားပြီး ညဘက်တွင် အပူပြန်ထုတ်သဖြင့်ညဘက်အပူချိန် မြင့်တက်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။
(၅) အသက်(၄)နှစ်အောက်နှင့် အသက်(၆၅)နှစ်အထက်။
ကလေးများတွင် အပူထိန်းချုပ်စနစ် ကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုးသေးသဖြင့်လည်းကောင်း၊အသက် (၆၅)နှစ် အထက်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အပူထိန်းချုပ်စနစ်ဟောင်းနွမ်း ချို့ယွင်းသောကြောင့် လည်းကောင်း အပူလွန်ရောဂါဖြစ်နှုန်း ပိုမြင့်ပါသည်။
နှလုံး၊ အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူများ၊ ၀လွန်းခြင်း၊ ပိန်လွန်းခြင်း၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးချို၊ စိတ်ရောဂါ၊ ဆစ်ကဲလ်ဆဲလ် သွေးနီဥ ရောဂါ (Sickle cell Triat)၊ အရက်စွဲရောဂါ၊ နေလောင်ခြင်းနှင့် အဖျားရောဂါရှိသူများတွင် လည်း အပူလွန်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
ဘာမီတွန်ကဲ့သို့သော ဓာတ်မတည့်ရောဂါ ပျောက်ဆေးများ(Anti Histamines)၊ ပိန်ဆေးများ၊ ဆီးဆေးများ၊ အိပ်ဆေးစိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ စိတ်ကြွဆေးများ၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ ကုဆေးများ၊ နှလုံးနှင့် သွေးတိုးရောဂါကုဆေးများ၊ စိတ် ရောဂါကုဆေးများ၊ မူးယစ်ဆေးများ (ကိုကင်းနှင့် မက်အက်ဖီတမင်း) အနက် အချို့သည် အပူလွန်ရောဂါဖြစ်နှုန်းကို မြင့်စေသည်။
အားကစားလုပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ နေပူထဲလယ်ကွင်းထဲတွင် တောင်သူလယ်သမား များ လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်းသမားများ၊ ထင်းခွေ တောတက်သူများသည် အပူလွန်ကဲမှု ဒဏ်ဖြစ်ရန် အလားအလာများကြသည်။
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ထိရောက်သည်၊ ပူပြင်းသောရာသီ/နေ့၊ အပူညွှန်းကိန်းမြင့်သော အချိန်များတွင်
(၁) ရေနှင့်အရည် သစ်သီးဖျော်ရည် များများသောက်ရမည်။ တစ်နေ့လျှင် ရေဖန်ခွက် ရှစ်ခွက် အနည်းဆုံးသောက်သင့်သည်။ ရေအပြင် ဓာတ်ဆားဖျော်ရည်(ဥပမာသီးစုံဓာတ်ဆား၊ ဘီပီအိုင် ဓာတ်ဆားစသည်များ) များပါသောက်သင့်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ချွေးထဲတွင်ရေသာမက ဆားဓာတ်များပါ ပါဝင်သဖြင့် ရေသာမကဓာတ်ဆားများပါသောက်ရခြင်းဖြစ် သည်။ အကယ်၍ချွေးထွက်လွန်ခြင်းတွင် ဓာတ်ဆားများ ဆုံးရှုံးသောအခါကြွက်တက်ခြင်းမှသည် နှလုံးရပ်ခြင်းအထိဖြစ်နိုင်သည်။
(၂) ရေချိုးရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာအေးအောင် ချိုးရမည်။အထူးသဖြင့် အပြင်မထွက်မီ ရေကိုအေးအောင်ချိုးထားမှအပူချိန်လွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည်။
(၃)ချောင်ချိ၍ပေါ့ပါးသော အရောင်ဖျော့ဖျော့ အဝတ်များကို ဝတ်ရမည်။ အရောင်ရင့်လျှင် အပူကိုစုပ်ယူမှု ပို၍ အထူးသဖြင့် အနက်ရောင်၊ အမည်းရောင်သည် အပူစုပ်ယူမှုအများဆုံးဖြစ်၍ အဖြူရောင်သည် အပူစုပ်ယူမှု အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
(၄) နံနက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတွင်း နေအပူရှိန် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သဖြင့် ထိုအချိန်ပြင်ပမထွက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
(၅) အရက်အလွန်အကျွံမသောက်ရ၊ အရက်သည် ကယ်လိုရီမြင့်သောအရည်ဖြစ်၍ ကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်ကို တက်စေသည်။
(၆) လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၊ အလုပ်ကြမ်းများ ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်သင့်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုသောအခါ ကြွက်သားများသည် စွမ်းအင်လိုသည်။စွမ်းအင်ရရှိရန် အောက်စီဂျင်နှင့်အက်ဒီနိုစင်းထရိုင်ဖော့စဖိတ်(ATP) ကို ပေါင်းသည်။ ထိုသို့ပေါင်းစပ်မှုတွင်ဘေးထွက်ပစ္စည်းအနေနှင့် အပူထွက်ပေါ်လာသည်။
(၇)ရောဂါအခံရှိသူများ၊ ကလေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းများကိုစောင့်ကြည့် ပါ။ ရေဓာတ်မချို့တဲ့အောင်၊ အပူလျော့အောင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပါ။
(၈) အဝိုင်းပတ်/ဘေးကာကြီးသော ဦးထုပ်၊ ခမောက်၊ ထီးစသည်များဆောင်းခြင်းဖြင့် အပူဒဏ်သာမက၊ အနီ အောက်ရောင်ခြည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်နေလောင်ခြင်း (Sun burn) တို့ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ လေဝင် လေထွက်ကောင်းသော ဦးထုပ်ဆိုလျှင် ပိုကောင်းပါ သည်။
(၉) SPF 30 နှင့်အထက်ရှိသော နေရောင်ကာ လိမ်းဆေးကိုလိမ်းပါ။ (SPF=Sun Protection Factor)။
(၁၀) ဆီးကို စစ်ဆေးပါ၊ ဆီးအရောင်ရင့်နေလျှင် ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကိုပြသည်။ ရေလုံလောက်အောင် ထပ်သောက်ခြင်းဖြင့် ဆီးအရောင်ဖျော့စေသည်။
(၁၁) ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ထားခြင်းဖြင့် ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးရသောရေပမာဏကို တွက်ချက်နိုင်သည်။
(၁၂) ကဖိန်းနှင့် အရက်ပါသော အရည်/ဖျော်ရည်များကိုလုံးဝမသောက်ပါနှင့်။ ယင်းတို့သည် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသဖြင့် အပူဒဏ်ကို ပို၍ဆိုးစေပါသည်။
(၁၃) ဆားဆေးပြားများ (Salt Tablets)ကို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ မသောက်ပါနှင့်။ ရေများများ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ ဓာတ်ဆားရည်များသောက်ခြင်းသည်သာ အလွယ်ဆုံးနှင့် အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
(၁၄) အလွန်ပူသောအချိန်တွင် တချို့လူများသည် အေးရင်ပြီးရောဆိုသည့် သဘောနှင့် ရေစိုအဝတ်များဝတ်ခြင်း၊ ရေစိုအခင်းများခင်း၍ အိပ်ခြင်း၊ ရေစိုအဝတ်များပတ်ပတ်လည်တွင် လှန်းခြင်းများ လုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ဤအပြုအမူများသည် စိုထိုင်းဆ(Humidity)ကို မြင့်မားစေ၍၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အငွေ့ပျံခြင်းတို့ကိုနှောင့်ယှက်သဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ သဘာဝအရ အေးအောင် လုပ်သော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် နှောင့်နှေးခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊ ချွေးငုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသဖြင့် ခဏတာအေးသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ရေရှည်တွင် ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်၍အပူလေဖြတ်ကာ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်၍ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
(၁၅)အလွန်ပူသောအချိန်တွင် အရိပ်လည်းရ၊ နေမရှိန်သောနေရာ၊ လေတိုက်သောနေရာ၊ စိုထိုင်းဆနည်းသော နေရာတွင် ချွေးတစိုစိုနှင့်ငြိမ်သက်စွာနေမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်အပူချိန်ကျ၍ တဖြည်းဖြည်း အေးနိုင်ပါသည်။
(၁၆)လေမတိုက်ပါက ယပ်တောင်၊ ပန်ကာ၊ လေအေးပေးစက်များ သုံးနိုင်ပါသည်။
(၁၇) ချွေးစိုနေသော အဝတ်များကို ခြောက်သွေ့သော အဝတ်များနှင့် လဲပေးသင့်သည်။ စိုစွတ်နေသော အဝတ်များသည် ချွေးအငွေ့ပျံခြင်းကိုတားဆီးသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အပူလွန်ရောဂါများမှကင်းဝေးစေရန်အတွက် ဖော်ပြပါ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို သတိမူလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ပူပြင်းသောကာလကိုကျန်းကျန်းမာမာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။ ။
ဒေါက်တာ ဇော်ထွန်းလင်း (ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ)
ယခုလို နှရောသီတှငျ အပူခြိနျပွငျးထနျခွငျးကို နှဈစဉျကွုံတှရေ့တတျသညျ။ ပွငျပအပူခြိနျ လှနျကဲခွငျး ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျနိုငျသညျကို လူတိုငျးသတိပွု သငျ့သညျ။
လူ၏ခန်ဓာကိုယျ ကလာပျစညျးမြားသညျ သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးတာဝနျမြားကို ထမျးဆောငျရနျ ကောငျးမှနျ သော ဇီဝကမ်မအခွအေနေ (Optimal Physiological Status)ရှိဖို့လိုသညျ။ လုံလောကျသော အရညျနှငျ့ ဓာတျ ဆားမြှခွေ (Fluid and Electrolyte Balance)၊ အခဉျြ အခါးမြှခွေ (Acid Base Balance)စသညျ့ အခွအေနမြေား လိုအပျသညျ့အပွငျ သငျ့တငျ့မြှတသော အပူခြိနျ (Optimal Temperature)ရှိဖို့လညျး အရေးကွီးသညျ။
လူ၏ဦးနှောကျရှိ ဟိုကျပိုသားလမတျဈ (Hypothalmus) တှငျ ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျကို ထိနျးခြုပျသောဗဟို ဌာန (Thermoregulation Center) ရှိသညျ။ ထိုနရော တှငျ အပူခြိနျကိုအာရုံခံနိုငျသော နာ့ဆဲလျမြား (Thermo – sensitive neurons) ရှိ၍ လိုအပျသောအခြိနျတှငျ ခန်ဓာကိုယျအနှံ့အပွားရှိ ခြှေးဂလငျးမြား (Sweat Glands) ကို ခြှေးထှကျစရေနျ လှုံ့ဆျောပေးသညျ။ ထို့ပွငျ အရပွေားရှိ အပူခြိနျလကျခံ နာ့ဆဲလျမြား (Thermoreceptor neurons)မြားမှ သတငျးပို့ခကျြမြားကိုလညျး အပူခြိနျးထိနျးခြုပျ ဗဟိုဌာနက လကျခံသညျ။ ခန်ဓာကိုယျ အပူလှနျကဲလြှငျ အပူဆုံးရှုံးစသေောစနဈ (Heat Loss Mechanism)ဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျအပူလြော့စေ၍အအေး လှနျကဲလြှငျ အပူရရှိစသေောစနဈ (Heat Gain Mechanism) ဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပွနျလညျနှေးထှေးလာ စသေညျ။ ဤနညျးဖွငျ့ ကိုယျခန်ဓာအပူခြိနျကို ၉၇ ဒသမ ၅ နှငျ့ ၉၉ ဒသမ ၅ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျတှငျထိနျးထားသညျ။
ပွငျပအပူခြိနျ (Environmental Temperature) မွငျ့တကျလာသောအခါ အရပွေား အာရုံခံနာ့ဆဲလျမြားမှ ဦးနှောကျဗဟိုဌာနသို့ သတငျးပို့သဖွငျ့ အရပွေားအောကျရှိသှေးကွောမြား ကယျြလာပွီး ခြှေးထှကျခွငျးကိုဖွဈစသေညျ။ ထှကျလာသောခြှေးမြား အငှပြေံ့ခွငျး(Evaporation)ဖွငျ့ အရပွေားအပူခြိနျကို လြော့စသေညျ။ အရပွေားရှိ သှေးပွနျကွောမြားမှ နှလုံးသို့ရောကျရှိပွီး ထိုမှတဈဆငျ့ ကိုယျတှငျးအပူခြိနျ (Core Temperature) ကလြာသညျ။ ခြှေးထှကျခွငျးသညျ ပူသောအခြိနျ ကိုယျအပူခြိနျကိုကစြသေော အဓိကအကွောငျးရငျးဖွဈသညျ။ ကိုယျအပူခြိနျကို လြော့စသေော အခွားနညျးမြားမှာ အပူဖွာထှကျခွငျး(Radiation)၊ အပူစီးထှကျခွငျး (Convection)၊ အပူကူးပွောငျးခွငျး (Conduction) တို့ဖွငျ့လညျး ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျကစြနေိုငျသညျ။
အပူဖွာထှကျခွငျးဖွဈရနျမှာ လကျရှိခန်ဓာကိုယျ အပူခြိနျထကျနညျးသောနရော(ဥပမာ-အရိပျထဲ)တှငျ ခန်ဓာကိုယျမှ အပူမြားဖွာထှကျခွငျးဖွဈသညျ။ အပူစီးထှကျခွငျးဆိုသညျမှာ အရပွေားအပျေါ ကပျလကျြ လလှော သို့မဟုတျ ရလှောဖွတျသနျးသှားသောအခါ ကိုယျခန်ဓာမှ အပူမြားကိုသယျဆောငျသှားခွငျးဖွငျ့ အပူလြော့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ အပူကူးပွောငျးခွငျးဆိုသညျမှာ အေးသောလေ သို့မဟုတျ ရနှေငျ့ တိုကျရိုကျထိတှသေ့ဖွငျ့ အပူမြား ကူးပွောငျး၍ ကိုယျခန်ဓာအပူလြော့ခွငျးဖွဈသညျ။ အေးသောရနှေငျ့ ထိတှခွေ့ငျးသညျ လအေေးနှငျ့ ထိတှခွေ့ငျး ထကျ ၂၅ ဆ ပို၍မွနျမွနျအေးသညျ။
အပူလှနျကဲမှုမြားကို ခန်ဓာကိုယျက အထကျပါနညျးလေးနညျးဖွငျ့ထိနျးညှိ၍ ကနျြးမာရေးထိခိုကျမှုမရှိအောငျ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးရှိပသေညျ။ သို့သျောပွငျပ အပူခြိနျ အလှနျအမငျးမွငျ့တကျသောအခါတှငျ လညျး ကောငျး၊ ခန်ဓာကိုယျ၏ အပူထိနျးသိမျးသညျ့စနဈ အားနညျးသညျ့အခါတှငျလညျးကောငျး စိုးရိမျရသညျ့ အခွအေနမြေား ဖွဈပျေါလာတတျပါသညျ။ ယငျးတို့မှာ (၁) အပူလှနျ ခွကေုနျလကျပနျးကခြွငျး (Heat Exhaustion) နှငျ့ (၂) အပူလဖွေတျခွငျး (Heat Stroke) တို့ဖွဈပါသညျ။
Heat Exhaustion တှငျ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ခေါငျးမူးခွငျး၊ ကယောငျကတမျးဖွဈခွငျး၊ ခံတှငျးပကျြခွငျး၊ နမေကောငျးဟုခံစားရခွငျး၊ ခြှေးအဆမတနျထှကျခွငျး၊ အရပွေားဖြော့တော့ စေးထိုငျးအေးစကျနခွေငျး၊ လကျမောငျး၊ ခွထေောကျနှငျ့ ဝမျးဗိုကျတှငျကွှကျတကျခွငျး၊ အသကျရှူခွငျးနှငျ့ သှေးခုနျနှုနျးမွနျခွငျး၊ ကိုယျအပူခြိနျ ၃၈ ဒီဂရီစငျဒီဂရိတျ သို့မဟုတျ ယငျးနှငျ့ အထကျတှငျရှိ ခွငျး၊ ရအေလှနျအမငျးငတျခွငျးတို့ဖွဈသညျ။ ထိုလက်ခဏာ မြားသညျ လူကွီးနှငျ့ကလေးတှငျ တူလရှေိ့သျောလညျး ကလေးမြားတှငျ အရုပျကွိုးပွတျသကဲ့သို့ ဖွဈနပွေီး အိပျငိုကျနမေညျ။ အထကျပါလက်ခဏာမြား ပျေါလာလြှငျ ခန်ဓာ ကိုယျကို အမွနျဆုံးအေးအောငျလုပျဖို့ လိုပါသညျ။
(၃) ရမြေားမြားသောကျပါ။ အခွားရဖွေညျ့ပေးသော ဖြျောရညျမြားလညျးရပါသညျ။
(၄)အရပွေားကိုအေးအောငျလုပျပါ၊ ရအေေးဖွငျ့ ဖနျြးခွငျး၊ ရပေတျတိုကျခွငျးမြားပွုလုပျပွီး ပနျကာလခေံပါ၊ ခြိုငျးကွားနှငျ့ လညျပငျးတှငျ ရပေတျတိုကျခွငျးမြားလညျး အကြိုးရှိပါသညျ။ အထကျပါလုပျဆောငျခကျြမြားကိုလုပျလြှငျ မိနဈ ၃၀ အတှငျးပွနျကောငျးလရှေိ့ပါသညျ။
အကယျ၍မိနဈ ၃၀ ခနျ့ကွာသျောလညျး မသကျသာလြှငျ၊ ကိုယျပူပွီး ခွောကျသှနေ့လြှေငျ ကိုယျပူသျောလညျး ခြှေးမထှကျလြှငျ၊ ကိုယျအပူခြိနျ ၄၀ ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ(၁၀၄ ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ)နှငျ့ အထကျဖွဈလြှငျ၊ အရပွေားနီရဲခွောကျသှေ့၍ ပူနလြှေငျ၊ အသကျရှူတို၍ မွနျနလြှေငျ၊ ကယောငျကတမျးဖွဈလာလြှငျ ဝကျရူးပွနျ သကဲ့သို့တကျလြှငျ၊ သတိလဈမမွေ့ောသှားလြှငျ အပူလဖွေတျသညျ့ လက်ခဏာမြားဖွဈသဖွငျ့ အလှနျစိုးရိမျရပါ သညျ။ ဆေးအကူအညီ အမွနျဆုံးရယူခွငျး (ဥပမာဆေးရုံကား ဖုနျးဆကျချေါခွငျး၊ တောရှာဖွဈလြှငျ ဆေး ဝနျထမျး၊ ကနျြးမာရေးဆရာမ၊ သူနာပွု၊ ဆရာဝနျပငျ့ခွငျး၊ ချေါခွငျး)ဆောငျရှကျ၍ ဆေးရုံတငျရပါမညျ။
(၁) လအေေးပေးစကျ၊ ပနျကာစသညျမရှိသော၊ လဝေငျလထှေကျမကောငျးသော၊ လကေောငျး လသေနျ့ မရသော အခနျးမြားတှငျနရေသူမြား၊
(၂) ရလေုံလောကျစှာ မသောကျရသောသူမြား၊ နာတာရှညျရောဂါသညျမြား၊ အရကျအလှနျ အကြှံသောကျသူမြား။
(၃) အပူညှနျးကိနျး(Heat Index)မွငျ့သောနရော တှငျ နသေူမြား။
အပူညှနျးကိနျးဆိုသညျမှာ ခံစားရသော အပူခြိနျ နှငျ့ စိုထိုငျးဆကို အခြိုးခတြိုငျးတာသော တနျဖိုး တဈခုဖွဈသညျ။ အပူညှနျးကိနျး ၆၀ ရာခိုငျနှုနျး အထကျရှိသော နရောမြားတှငျ ခြှေးငုပျစသေဖွငျ့ ကိုယျခန်ဓာက ကိုယျ့ဘာသာ အေးအောငျ မလုပျနိုငျတော့ပါ။ အပူညှနျးကိနျး ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးအထကျဆိုလြှငျ (အထူးသဖွငျ့ အပူလှိုငျးဖွတျသောအခါ) အပူကွောငျ့ဖွဈသော ကနျြးမာရေး ခြို့ယှငျးမှု(Heat – Related illness)ဖွဈပှားနှုနျး အမွငျ့ဆုံးဖွဈပါသညျ။ အပူညှနျးကိနျးကို မိုးလဝေသဌာနမှ အခါအားလြျောစှာ ထုတျပွနျ၍ အမြားပွညျသူ သိရှိအောငျ ရဒေီယို၊ရုပျမွငျသံကွားတို့မှ ကွညောပေးသငျ့ပါသညျ။
မွို့ပွတှငျ လထေုညဈညမျးမှုနှငျ့ လထေုစုပုံငွိမျသကျမှု (Stagnant atmorspheric condition)ကွောငျ့ အပူစုဝေးမှုအကြိုး (Heat Island Effect) ဖွဈပျေါနတေတျခွငျးသညျ အပူလှနျရောဂါမြားကိုဖွဈစသေညျ။ နဘေ့ကျတှငျ ကှနျကရဈနှငျ့အုတျမြားသညျ အပူကို စုပျယူထားပွီး ညဘကျတှငျ အပူပွနျထုတျသဖွငျ့ညဘကျအပူခြိနျ မွငျ့တကျမှုကိုလညျး ဖွဈစသေညျ။
(၅) အသကျ(၄)နှဈအောကျနှငျ့ အသကျ(၆၅)နှဈအထကျ။
ကလေးမြားတှငျ အပူထိနျးခြုပျစနဈ ကောငျးစှာမဖှံ့ဖွိုးသေးသဖွငျ့လညျးကောငျး၊အသကျ (၆၅)နှဈ အထကျတှငျ ခန်ဓာကိုယျအပူထိနျးခြုပျစနဈဟောငျးနှမျး ခြို့ယှငျးသောကွောငျ့ လညျးကောငျး အပူလှနျရောဂါဖွဈနှုနျး ပိုမွငျ့ပါသညျ။
နှလုံး၊ အဆုတျ၊ ကြောကျကပျရောဂါရှိသူမြား၊ ဝလှနျးခွငျး၊ ပိနျလှနျးခွငျး၊ သှေးတိုး၊ ဆီးခြို၊ သှေးခြို၊ စိတျရောဂါ၊ ဆဈကဲလျဆဲလျ သှေးနီဥ ရောဂါ (Sickle cell Triat)၊ အရကျစှဲရောဂါ၊ နလေောငျခွငျးနှငျ့ အဖြားရောဂါရှိသူမြားတှငျ လညျး အပူလှနျရောဂါဖွဈနိုငျသညျ။
ဘာမီတှနျကဲ့သို့သော ဓာတျမတညျ့ရောဂါ ပြောကျဆေးမြား(Anti Histamines)၊ ပိနျဆေးမြား၊ ဆီးဆေးမြား၊ အိပျဆေးစိတျငွိမျဆေးမြား၊ စိတျကွှဆေးမြား၊ ဝကျရူးပွနျရောဂါ ကုဆေးမြား၊ နှလုံးနှငျ့ သှေးတိုးရောဂါကုဆေးမြား၊ စိတျ ရောဂါကုဆေးမြား၊ မူးယဈဆေးမြား (ကိုကငျးနှငျ့ မကျအကျဖီတမငျး) အနကျ အခြို့သညျ အပူလှနျရောဂါဖွဈနှုနျးကို မွငျ့စသေညျ။
အားကစားလုပျခွငျး၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျး၊ နပေူထဲလယျကှငျးထဲတှငျ တောငျသူလယျသမား မြား လုပျငနျးလုပျခွငျး၊ အလုပျကွမျးသမားမြား၊ ထငျးခှေ တောတကျသူမြားသညျ အပူလှနျကဲမှု ဒဏျဖွဈရနျ အလားအလာမြားကွသညျ။
ကာကှယျခွငျးသညျ ကုသခွငျးထကျ ထိရောကျသညျ၊ ပူပွငျးသောရာသီ/နေ့၊ အပူညှနျးကိနျးမွငျ့သော အခြိနျမြားတှငျ
(၁) ရနှေငျ့အရညျ သဈသီးဖြျောရညျ မြားမြားသောကျရမညျ။ တဈနလြေှ့ငျ ရဖေနျခှကျ ရှဈခှကျ အနညျးဆုံးသောကျသငျ့သညျ။ ရအေပွငျ ဓာတျဆားဖြျောရညျ(ဥပမာသီးစုံဓာတျဆား၊ ဘီပီအိုငျ ဓာတျဆားစသညျမြား) မြားပါသောကျသငျ့သညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ခြှေးထဲတှငျရသောမက ဆားဓာတျမြားပါ ပါဝငျသဖွငျ့ ရသောမကဓာတျဆားမြားပါသောကျရခွငျးဖွဈ သညျ။ အကယျ၍ခြှေးထှကျလှနျခွငျးတှငျ ဓာတျဆားမြား ဆုံးရှုံးသောအခါကွှကျတကျခွငျးမှသညျ နှလုံးရပျခွငျးအထိဖွဈနိုငျသညျ။
(၂) ရခြေိုးရာတှငျ ကိုယျခန်ဓာအေးအောငျ ခြိုးရမညျ။အထူးသဖွငျ့ အပွငျမထှကျမီ ရကေိုအေးအောငျခြိုးထားမှအပူခြိနျလှနျကဲခွငျးကို ကာကှယျနိုငျမညျ။
(၃)ခြောငျခြိ၍ပေါ့ပါးသော အရောငျဖြော့ဖြော့ အဝတျမြားကို ဝတျရမညျ။ အရောငျရငျ့လြှငျ အပူကိုစုပျယူမှု ပို၍ အထူးသဖွငျ့ အနကျရောငျ၊ အမညျးရောငျသညျ အပူစုပျယူမှုအမြားဆုံးဖွဈ၍ အဖွူရောငျသညျ အပူစုပျယူမှု အနညျးဆုံးဖွဈသညျ။
(၄) နံနကျ ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအတှငျး နအေပူရှိနျ အမွငျ့ဆုံးဖွဈသဖွငျ့ ထိုအခြိနျပွငျပမထှကျတာ အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။
(၅) အရကျအလှနျအကြှံမသောကျရ၊ အရကျသညျ ကယျလိုရီမွငျ့သောအရညျဖွဈ၍ ကိုယျခန်ဓာ အပူခြိနျကို တကျစသေညျ။
(၆) လကေ့ငျြ့ခနျးနှငျ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု၊ အလုပျကွမျးမြား ပွငျးပွငျးထနျထနျမလုပျသငျ့၊ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုပွုသောအခါ ကွှကျသားမြားသညျ စှမျးအငျလိုသညျ။စှမျးအငျရရှိရနျ အောကျစီဂငျြနှငျ့အကျဒီနိုစငျးထရိုငျဖော့စဖိတျ(ATP) ကို ပေါငျးသညျ။ ထိုသို့ပေါငျးစပျမှုတှငျဘေးထှကျပစ်စညျးအနနှေငျ့ အပူထှကျပျေါလာသညျ။
(၇)ရောဂါအခံရှိသူမြား၊ ကလေးနှငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြား၊ မသနျစှမျးမြားကိုစောငျ့ကွညျ့ ပါ။ ရဓောတျမခြို့တဲ့အောငျ၊ အပူလြော့အောငျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျပါ။
(၈) အဝိုငျးပတျ/ဘေးကာကွီးသော ဦးထုပျ၊ ခမောကျ၊ ထီးစသညျမြားဆောငျးခွငျးဖွငျ့ အပူဒဏျသာမက၊ အနီ အောကျရောငျခွညျ၊ ခရမျးလှနျရောငျခွညျနှငျ့နလေောငျခွငျး (Sun burn) တို့ကို ကာကှယျနိုငျသညျ။ လဝေငျ လထှေကျကောငျးသော ဦးထုပျဆိုလြှငျ ပိုကောငျးပါ သညျ။
(၉) SPF 30 နှငျ့အထကျရှိသော နရေောငျကာ လိမျးဆေးကိုလိမျးပါ။ (SPF=Sun Protection Factor)။
(၁၀) ဆီးကို စဈဆေးပါ၊ ဆီးအရောငျရငျ့နလြှေငျ ရဓောတျခြို့တဲ့ခွငျးကိုပွသညျ။ ရလေုံလောကျအောငျ ထပျသောကျခွငျးဖွငျ့ ဆီးအရောငျဖြော့စသေညျ။
(၁၁) ကိုယျအလေးခြိနျ ခြိနျထားခွငျးဖွငျ့ ခြှေးထှကျခွငျးကွောငျ့ ဆုံးရှုံးရသောရပေမာဏကို တှကျခကျြနိုငျသညျ။
(၁၂) ကဖိနျးနှငျ့ အရကျပါသော အရညျ/ဖြျောရညျမြားကိုလုံးဝမသောကျပါနှငျ့။ ယငျးတို့သညျ ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုကိုဖွဈစသေဖွငျ့ အပူဒဏျကို ပို၍ဆိုးစပေါသညျ။
(၁၃) ဆားဆေးပွားမြား (Salt Tablets)ကို ဆရာဝနျမညှနျကွားဘဲ မသောကျပါနှငျ့။ ရမြေားမြား၊ သဈသီးဖြျောရညျမြား၊ ဓာတျဆားရညျမြားသောကျခွငျးသညျသာ အလှယျဆုံးနှငျ့ အန်တရာယျအကငျးဆုံးဖွဈပါသညျ။
(၁၄) အလှနျပူသောအခြိနျတှငျ တခြို့လူမြားသညျ အေးရငျပွီးရောဆိုသညျ့ သဘောနှငျ့ ရစေိုအဝတျမြားဝတျခွငျး၊ ရစေိုအခငျးမြားခငျး၍ အိပျခွငျး၊ ရစေိုအဝတျမြားပတျပတျလညျတှငျ လှနျးခွငျးမြား လုပျလရှေိ့ကွသညျ။ ဤအပွုအမူမြားသညျ စိုထိုငျးဆ(Humidity)ကို မွငျ့မားစေ၍၊ ခြှေးထှကျခွငျး၊ အငှပြေံ့ခွငျးတို့ကိုနှောငျ့ယှကျသဖွငျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျ၏ သဘာဝအရ အေးအောငျ လုပျသော ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျ နှောငျ့နှေးခွငျး၊ ရပျတနျ့ခွငျး၊ ခြှေးငုပျခွငျးကိုဖွဈစသေဖွငျ့ ခဏတာအေးသညျဟုထငျရသျောလညျး ရရှေညျတှငျ ကိုယျအပူခြိနျမွငျ့တကျ၍အပူလဖွေတျကာ အသကျသဆေုံးသညျအထိ ဖွဈနိုငျ၍ရှောငျကွဉျသငျ့ပါသညျ။
(၁၅)အလှနျပူသောအခြိနျတှငျ အရိပျလညျးရ၊ နမေရှိနျသောနရော၊ လတေိုကျသောနရော၊ စိုထိုငျးဆနညျးသော နရောတှငျ ခြှေးတစိုစိုနှငျ့ငွိမျသကျစှာနမေညျဆိုလြှငျ ကိုယျအပူခြိနျကြ၍ တဖွညျးဖွညျး အေးနိုငျပါသညျ။
(၁၆)လမေတိုကျပါက ယပျတောငျ၊ ပနျကာ၊ လအေေးပေးစကျမြား သုံးနိုငျပါသညျ။
(၁၇) ခြှေးစိုနသေော အဝတျမြားကို ခွောကျသှသေ့ော အဝတျမြားနှငျ့ လဲပေးသငျ့သညျ။ စိုစှတျနသေော အဝတျမြားသညျ ခြှေးအငှပြေံ့ခွငျးကိုတားဆီးသညျ။
သို့ဖွဈပါ၍ ယခုကဲ့သို့ ပူပွငျးသောနှရောသီတှငျ ဖွဈပှားတတျသော အပူလှနျရောဂါမြားမှကငျးဝေးစရေနျအတှကျ ဖျောပွပါ ဆောငျရနျရှောငျရနျမြားကို သတိမူလိုကျနာကငျြ့သုံးခွငျးဖွငျ့ ပူပွငျးသောကာလကိုကနျြးကနျြးမာမာ ဖွတျသနျးနိုငျကွပါစကွေောငျး တိုကျတှနျးရေးသားလိုကျရပါသညျ။ ။
ဒေါကျတာ ဇျောထှနျးလငျး (ဆေးပညာမဟာသိပ်ပံ)
Labels: Environmental articles, ဆောင်းပါး
ကြက်ကချင်ချက် _ ကြက်ခပတ်ကြော် _တမာရွက်ချဉ်စပ်သုပ် ...
ဒါဖတပြှီးမှ skin care ဝယပြါ
ကိုဗဈကာလမှာ အလုပျခှငျပွနျဝငျရမယျ့သူတှေ ဂရုစိုကျနိ...
မုဒိတာဦးဏှောက်ဖြင့် မုဒိတာတိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ခြ...
ကြက်ကြော်အချိုနှပ် - ရေမုန်ညင်းပဲပုပ်ကြော် - ဝက်အူ...
“လက်ထပ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်ခင် သူဟာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ...
*** အုန်းသီးနှင့် ကျန်းမာရေး ***
ဖရန့်စစ် ဒီကေ ချင်း (Francis D.K Ching) ၏ ဗိသုကာ စ...
COVID-19 နဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်ခြင်း (၀၈-၀၄-...
ပုရိသများနှင့် သုက်ထွက်ရန်ကြာလွန်းတဲ့ ပြဿနာ